lalampanorenana 2010 par Admin - Fichier PDF
lalampanorenana 2010 .pdf
Nom original: lalampanorenana_2010.pdfTitre: Microsoft Word - LALAM-PANORENANA.rtfAuteur: Admin
Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/04/2014 à 16:27, depuis l'adresse IP 86.69.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 6092 fois.
Taille du document: 153 Ko (46 pages).
HO AN’NY REPOBLIKA FAHEFATRA
Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary,
Hentitra amin'ny fanapahan-keviny hampandroso sy hampiroborobo ny fiaraha-monina
mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa, ny harena mbamin'ny havitrihana
ifotoran’ireo soatoavina ara-kolontsaina sy ara-panahy miainga avy amin’ny "fanahy mahaolona",
Resy lahatra amin’ny tokony hiverenan’ny fiaraha-monina malagasy amin’izay nihandohany,
ny maha-izy azy sy ny maha-malagasy, ary hidirana amin'ny rafi-baovaon'izao taona arivo
izao hitehirizina ny soatoavina sy foto-kevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy
manome hasina ny fiainam-piaraha-monina, tsy misy fanavakavahana ara-paritra arapiaviana, ara-poko, ara-pinoana, ara-pirehan-kevitra politika, ary tsy anavahana ny lahy sy ny
Mahatsapa fa tena zava-dehibe ny fametrahana ny fomba izorana amin’ny
Resy lahatra fa ny Fokonolona, nalamina ho Fokontany, no sehatra iainana, ivelarana,
ifanakalozana sy ifampierana amin'ny fandraisan'anjara mavitriky ny olom-pirenena,
Mahatsapa ny maha zava-dehibe tsy manam-paharoa ireo loharanon-karena avy amin’ny
zava-boahary manan’aina sy ireo harena an-kibon'ny tany samihafa ananan’i Madagasikara ka
ilaina arovana ho an'ny taranaka ho avy,
Mahatsapa fa ny tsy fanajàna ny Lalàmpanorenana na ny fanitsiana azy mba hanamafisana ny
fahefan'ny mpitondra nefa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka no antony mahatonga ny
Noho ny toerana misy ara-politika an'i Madagasikara sy ny fandraisany anjara an-tsitrapo eo
amin'ny fifarimbonan’ny firenen-tsamihafa, ka andraisany ho toy ny nataony, indrindra :
- ny Sata iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ;
- ny Fifanarahana mikasika ny zon'ny ankizy, ny zon’ny vehivavy, ny fiarovana ny
tontolo iainana, ny zo ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-politika, isam-batan’olona ary arakolontsaina ;
Mihevitra fa ny fivelaran'ny maha-izy azy sy ny fiavahan’ny Malagasy rehetra no fanoitra
ilaina ho an'ny fampandrosoana maharitra sy mirindra, ka ny fepetra arahina indrindra dia:
- ny fitandroana ny fandriampahalemana, ny firaisan-kina ary ny adidy amin'ny
fitandroana ny firaisam-pirenena eo amin'ny asa fametrahana politika fampandrosoana
mifandanja sy mirindra ;
- ny fanajana sy ny fiarovana ny fahalalahana sy zo fototra ;
- ny fananganana Fanjakana tan-dalàna izay hahatonga ny mpitondra sy ny entina
samy ho voafehin'ny fitsipi-dalàna mitovy, eo ambany fanaraha-mason'ny Fitsarana
- ny famongorana ny tsy fahamarinana, ny kolikoly, ny tsy fitoviana sy ny
fanavakavahana amin’ny endriny rehetra;
- ny fitantanana araka ny tokony ho izy sy ara-drariny ny harena voajanahary ilaina
amin’ny fampandrosoana ny olombelona ;
- ny fitantanana tsara eo amin'ny fitondrana ny raharaham-panjakana, amin'ny fomba
mangarahara eo amin'ny fitantanana sy ny fampandraisan'andraikitra ny mpitantana ny
- ny fisarahana sy fifandanjan'ny fahefana ampiharina araka ny fomba demokratika ;
- ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, amin'ny alàlan'ny fanomezana
fizakan-tena malalaka ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana na eo amin’ny sehatra
iandraiketany na eo amin’ny ara-bola ;
- ny fitandroana ny fiarovana ny ain'ny olona.
Dia manambara :
Andininy voalohany.- Firenena iray ny Vahoaka Malagasy ka mivondrona ho Fanjakana
masi-mandidy, tokana, repoblikana ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakàna sy ny
Ny demokrasia sy ny feni-kevitra momba ny Fanjakana tan-dalàna no fototra iorenan'ny
Repoblika. Eo amin'ny faritry ny taniny no maha masi-mandidy azy.
Tsy misy mihitsy mahazo manohintohina ny maha iray tsy anombinana ny tanin'ny
Ny fomba sy fepetra fivarotana sy fampanofana tany ho an’ny vahiny dia voafaritry ny lalàna.
Andininy 2.- Ny Fanjakana dia manamafy ny tsy fombàny ny atsy sy ny aroa eo
anatrehan'ny finoana samy hafa.
Ny tsy fampifangaroana ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin’ny Repoblika dia
miankina amin'ny foto-kevitra mikasika ny fisarahan'ny raharaham-panjakana sy ny
fikambanam-pivavahana ary ny solontenany.
Ny Fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo
amin'ny sehatrasan'izy ireo tsirairay avy.
Tsy misy mihitsy Lehiben'Andrim-panjakana na mambra ao amin'ny Governemanta afaka
miditra any amin'ny ambaratongam-pitarihana ny fikambanam-pivavahana iray; raha tsy
izany dia azon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana atao ny manongana azy na
heverina ho toy ny mametra-pialàna avy hatrany amin'ny asany na ny raharahany izy.
Andininy 3.- Ny Repoblikan'i Madagasikara dia Firenena miankina amin'ny rafitry ny
Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana izay ahitana Kaominina, Faritra ary Faritany
ka ny fari-pahefana sy ny foto-kevitra momba ny fizakan-tena ara-pitondran-draharaha sy arapitantanam-bola dia iantohan'ny Lalàmpanorenana sy faritan’ny Lalàna.
Andininy 4.- "Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana" no filamatry ny Repoblikan'i
Ny fanevany dia saina telo soratra, fotsy, mena, maitso, vita amin'ny tsivalana telo
Antananarivo no Renivohitry ny Repoblikan'i Madagasikara.
Ny lalàna no mametra ny fitombokasem-panjakana sy ny mari-piandrianan'ny
Andininy 5.- Ny vahoaka izay ipoiran'ny fahefana rehetra no masi-mandidy ka mampiasa
izany amin'ny alàlan'ny solontenany lany amin'ny alàlan'ny fifidianana andraisan’ny rehetra
anjara mivantana na tsy mivantana, na koa amin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka. Tsy
misy mihitsy ampahany amin'ny vahoaka, na olon-tokana mahazo manendry tena hampiasa
izany fahefana feno izany.
Ny fandaminana sy ny fitantanana ny raharaha rehetra momba ny fifidianana dia ankinina
amin'ny rafitra mahaleotena iray eto amin’ny Firenena.
Ny lalàna no mandamina ny fombafomba fampandehanana io rafitra io.
Mpifidy avokoa, araka ny fepetra faritan'ny lalàna, ny olom-pirenena lahy sy vavy rehetra
mizaka ny zon'ny isam-batan'olona sy ny zo politika. Didim-pitsarana raikitra no hany
mahavery ny zo maha-mpifidy.
Andininy 6.- Ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka. Mitovy ny olona rehetra eo
anatrehan'ny lalàna, na izy natao hiarovana, na izy natao handidy, na izy natao hamaizana.
Mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, samy manana fahalalahana fototra
arovan'ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny maha-lahy na amin'ny maha-vavy,
na amin'ny fari-pahalalàna, na amin'ny fari-piainana, na amin'ny fiaviana, na amin'ny finoana,
na amin'ny tsy fitovian-kevitra.
Ny lalàna no manome tombony ny fitoviana amin’ny fidirana sy ny fandraisan’anjaran’ny
vehivavy sy ny lehilahy amin’ny fisahanan’asam-panjakana sy amin’ny asa eo amin’ny
sehatry ny fiainana ara-politika, ara-toekarena sy ara-tsosialy.
NY AMIN'NY FAHALALAHANA SY NY AMIN'NY ZO
AMAN'ANDRAIKITRY NY OLOM-PIRENENA
NY AMIN'NY ZO AMAN'ANDRAIKITRY NY
ISAM-BATAN'OLONA SY NY ZO POLITIKA
Andininy 7.- Ny zon'ny isam-batan'olona sy ny fahalalahana fototra dia iantohan'ny
Andininy 8.- Arovan'ny Lalàna ny zon’ny olona rehetra hiaina. Tsy azo atao ny manala
ain’olona amin’ny fomba tsy rariny. Tsy azo heverina ho fandikàna ity andininy ity ny
famonoana raha toa ka tsy maintsy ilaina ny fampiasana hery mba hiantohana ny fiarovana ny
olona rehetra amin'ny herisetra tsy ara-dalàna.
Tsy misy olona azo ampahoriana, saziana na ampijaliana amin’ny fomba tafahoatra sy tsy
mendrika manetry ny maha-olombelona.
Voarara indrindra ny manery olona iray hanaovana andrana ara-pitsaboana na ara-tsiansa raha
tsy nahazoana ny fanekeny malalaka.
Andininy 9.- Ny olona rehetra dia manan-jo amin'ny fahalalahana ary tsy azo samborina na
tànana am-ponja tsy amin’antony.
Tsy misy olona azo enjehina na samborina na tànana am-ponja raha tsy noho ny anton-javatra
voafaritry ny lalàna ary araka ny fomba voadidiny.
Izay niharan'ny fisamborana na fitànana am-ponja tsy ara-dalàna dia manan-jo hahazo onitra.
Andininy 11.- Manan-jo hahalala vaovao ny tsirairay.
Tsy misy faneriterena mialoha azo ampiharina amin’ny fampahalalam-baovao amin’ny
endriny rehetra ankoatr’ireo izay mamoafady na mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka.
Zo ny fahalalahana amin'ny fampahalalam-baovao, na toy inona toy inona no hanohanana
izany. Ny fampiasana io zo io dia adidy sy andraikitra saingy voafehin'ny fombafomba,
fepetra, na sazy voalazan'ny lalàna, izay fepetra ilaina ao anatin'ny fiaraha-monina
Voarara amin’ny endriny rehetra ny sivana.
Ny fisahanana ny asa aman-draharahan'ny mpanao gazety dia voalamina araka ny lalàna.
Andininy 12.- Ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manana zo handao sy hiverina eto
amin'ny tanim-pirenena araka ny fepetra voatondron'ny lalàna.
Zon'ny tsirairay ny mivezivezy sy manorim-ponenana an-kahalalahana manerana ny tanin'ny
Repoblika, rehefa voahaja ny zon'ny hafa sy ny fepetra faritan'ny lalàna.
Andininy 13.- Ny olona tsirairay dia iantohana amin’ny tsy fahazoana manao an-keriny na
amin’ny tenany, amin’ny fonenany sy amin’ny tsiambaratelon’ny fifandraisany.
Tsy misy fisavan-trano na toerana azo atao raha tsy alàlana omen’ny lalàna ary araka ny baiko
an-tsoratra nomen’ny fahefana mpitsara afaka manao izany, afa-tsy amin’ireo izay tratra
Tsy misy olona azo sazina raha tsy araka ny lalàna navoaka hanan-kery alohan’ny nanaovana
ilay fihetsika mahavoasazy.
Tsy misy olona azo sazina indroa noho ny toe-javatra iray efa nanamelohana azy.
Ny lalàna dia miantoka ny zo hitady ny rariny sy ny hitsiny ho an’ny olona rehetra ary tsy
vato misakana izany velively ny tsy fahampian’ny fidiram-bola aminy.
Iantohan’ny Fanjakana ny zom-piarovan-tena feno sy tsy azo hozongozonina eo anatrehan’ny
antokom-pitsarana rehetra, amin’ny dingana rehetra eo amin’ny fizotry ny ady, manomboka
amin’ny famotorana mialoha eo amin’ny ambaratongan’ny mpanao famotorana na ny
Voarara ny fanerena ara-tsaina rehetra sy/na fampijaliana ara-batana mba hisamborana olona
iray na hitànana azy am-ponja.
Heverina ho tsy manan-tsiny ny voampanga sy voarohirohy rehetra mandra-pisian’ny didimpitsarana raikitra manameloka azy.
Toe-javatra manokana ny fitànana am-ponja vonjimaika.
Andininy 14.- Zon'ny olona rehetra no mivondrona an-kahalalahana ao anaty fikambanana,
nefa tsy maintsy manaraka ny voalazan'ny lalàna.
Toy izany koa ny momba ny zo hanangana antoko politika. Ny lalàna momba ny antoko
politika no mametra ny fomba entina manangana sy mamatsy vola azy ireo.
Raràna ny fikambanana sy ny antoko politika izay manohintohina ny maha-iray tsy mivaky ny
Firenena sy ny foto-kevitra repoblikana, sy izay manindrahindra fanjakazakana na
fanavakavahana ara-pirazanana, ara-poko na ara-pinoana.
Mandray anjara amin'ny fanehoana safidy ny antoko sy fikambanana politika.
Ny Lalàmpanorenana no miantoka ny zo hijoro ho mpanohitra amin'ny fomba demokratika.
Aorian'ny fifidianana solombavambahoaka, ny vondrona politika mpanohitra dia manendry
ny lehiben'ny mpanohitra. Raha tsy misy ny fifanarahana dia ny lehiben'ny vondrona politika
mpanohitra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin’ny latsabato no heverina ho
Ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra, eken'ity Lalàmpanorenana ity sy
manome azy indrindra ny sehatra ahafahana haneho hevitra, dia faritana amin'ny alàlan'ny
Andininy 15.- Manan-jò hilatsaka hofidina amin'ny fifidianana rehetra voalazan'ny
Lalàmpanorenana ny olom-pirenena tsirairay rehefa voahaja ny fepetra takian’ny lalàna.
Andininy 16.- Adidin'ny tsirairay ny manaja ny Lalàmpanorenana sy ireo Andrim-panjakana,
ary ireo didy aman-dalàn'ny Repoblika eo am-pizakàna ny zo sy ny fahalalahana eken’ity
NY AMIN’NY ZO SY ADIDY MOMBA NY TOEKARENA SY SOSIALY ARY
maha-izy azy ny tsirairay, ny fahamendrehany, ny fivelarany feno ara-batana sy ara-tsaina ary
Andininy 18.- Voninahitra sy adidy ny fanompoam-pirenena voadidin'ny lalàna. Ny
fanatontosana izany dia tsy manembantsembana ny toerana misy ny olom-pirenena eo
amin'ny asany na ny fampiasana ny zo politika ananany.
Andininy 19.- Mankatò sy mandamina ny zon'ny tsirairay amin'ny fiarovana ny fahasalamana
dieny hatrany am-bohoka ny Fanjakana amin'ny alàlan'ny fandaminana ny fitsaboana ara7
panjakana maimaimpoana, ka ny maha maimaimpoana izany dia avy amin'ny fahafaha-manao
Andininy 20.- Arovan’ny Fanjakàna ny ankohonana izay singa voajanahary sy andrin’ny
fiaraha-monina. Manana zo hanorina fianakaviana ary hamela ireo fananany manokana
holovain'ny taranany ny olona tsirairay avy.
Andininy 21.- Ny Fanjakana no miantoka amin'ny alàlan'ny famoahan-dalàna sy ny
fananganana rafitra mpiahy mifanentana amin'ny fiarovana ny fianakaviana mba hahazoany
mivoatra tsara, ka ao anatin'izany indrindra ny fiahiana ny reny sy ny zaza.
Andininy 22.- Raisin’ny Fanjakana ho adidy ny fandraisana ny fepetra ilaina amin’ny
fampandrosoana ara-tsaina ny isam-batan’olona ka tsy misy fameperana afa-tsy ny
Andininy 23.- Manan-jo hianatra sy handray fanabeazana ny ankizy tsirairay avy ka
tompon’andraikitra amin’izany ny ray aman-dreny ka hajaina ny fahalalahana hisafidy
Andininy 24.- Mandamina fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetra
hidirana ny Fanjakana. Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny
Andininy 25.- Eken’ny Fanjakana ny fisian’ny fampianarana tsy miankina aminy ary
iantohany ny fahalalahana hanome izany fampianarana izany raha toa ka mifandanja amin’ny
fepetra mikasika ny fampianarana momba ny fitandremam-pahasalamana sy ny fitondran-tena
ary ny lentan’ny fianarana faritan’ny lalàna.
Ireny toeram-pampianarana tsy miankina ireny dia fehezin’ny lalàna momba ny hetra araka
ny fepetra faritan’ny lalàna.
Andininy 26.- Manan-jo handray anjara amin’ny fiainana ara-kolontsain’ny fiaraha-monina,
amin’ny fandrosoana ara-tsiansa ary hioty ireo vokatsoa aterak’izany ny isam-batan’olona.
Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, no miantoka
ny fampivoarana sy ny fiarovana ny vakoka ara-kolontsaim-pirenena sy ny famokarana aratsiansa, ara-haisoratra ary ara-javakanto.
Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no miantoka
ny zom-pitompoana ara-tsaina.
Andininy 27.- Zo sy adidy ho an’ny olom-pirenena tsirairay ny asa sy ny fiofanana arak’asa.
Ny fidirana amin’ny asam-panjakana dia misokatra ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy misy
fepetra ankoatry ny fahafaha-manao sy ny fahaizana.
Na izany aza anefa, azo atao ny mametra isaky ny fari-piadidiana, ny isan’ny olona raisina ho
ao amin'ny asam-panjakana ka ho faritan’ny lalàna ny fe-potoana faharetan’izany sy ny fomba
Andininy 28.- Tsy misy natao ho matiantoka amin’ny asa aman-draharahany noho ny mahalahy na maha-vavy azy, ny taona, ny finoana, ny firehan-kevitra, ny fiaviana, noho ny mahampikambana ao anaty rafitra sendikaly na koa ny faharesen-dahatra ara-politika.
Andininy 29.- Ny olom-pirenena tsirairay dia manan-jo handray valin-kasasarana mifandanja
amin’ny asa ataony izay ahafahany miantoka azy sy ny ankohonany, fiainana araka ny
Andininy 30.- Miezaka ny Fanjakana hiahy ny filàn’ny olom-pirenena rehetra izay mety ho
tsy afaka miasa noho ny taonany, na noho ny kilemany ara-batana na ara-tsaina, ka izany dia
amin’ny alalàn’ny firotsahan’ny andrim-panjakana na antokon-draharaha miendrika sosialy
Andininy 31.- Eken’ny Fanjakana ny zon’ny mpiasa tsirairay hiaro ny tombontsoany amin’ny
alalàn’ny hetsika sendikaly ary indrindra amin’ny alalàn’ny fahalalahana hanangana sendikà.
Malalaka ny fidirana aminà sendika.
Andininy 32.- Zon’ny mpiasa tsirairay, indrindra amin’ny alàlan'ny solontenany, ny mandray
anjara amin’ny famaritana ireo fitsipika sy fepetra momba ny asa.
Andininy 33.- Ekena ny zo hanao fitokonana nefa izany dia tsy tokony hanohintohina ny
fampandehanana ny asam-bahoaka na ny tombontsoa fototry ny Firenena.
Ny fepetra hafa fampiasana io zo io dia feran’ny lalàna.
Andininy 34.- Iantohan’ny Fanjakana ny fananan’ny tsirairay zo hanana fananana manokana.
Tsy misy fananan’olona azo ongotana aminy raha tsy noho ny tombontsoam-bahoaka kanefa
izany dia tsy maintsy handoavana onitra ara-drariny mialoha.
Ny Fanjakana no miantoka ny fanamorana amin’ny fahazoana ny fizakan-tany amin’ny
alàlan'ny famoronana lalàna sy rafitra hisian’ny mangarahara amin’ny fahazoam-baovao
momba ny tany.
Andininy 35.- Amorain’ny Fanjakàna ny fahazoan’ny olom-pirenena trano fonenana amin’ny
alàlan'ny fomba famatsiam-bola sahaza.
Andininy 36.- Tsy maintsy mandroso miandalàna sy tombanana arakaraky ny fahafahany
mandoa hetra ny fandraisan’ny olom-pirenena tsirairay anjara amin’ny fandaniam-bolampanjakana.
Andininy 37.- Ny Fanjakana no miantoka ny fahalalahan’ny fandraharahana ao anatin’ny
faritry ny fanajana ny tombontsoa iombonana, ny filaminam-bahoaka, ny fitondran-tena
mendrika ary ny tontolo iainana.
Andininy 38.- Ny Fanjakana no miantoka ny fiarovana ny renivola sy ny fampiasam-bola
Andininy 39.- Ny Fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin’ny Fitondrandraharaham-panjakana, ny Foloalindahy, ny Fitsarana, ny Mpitandro ny filaminana , ny
Fampianarana ary ny Fanabeazana.
Izy no mandamina ny Fitondran-draharaham-panjakana mba hisorohana amin’ireo asa rehetra
fandanindaniam-poana sy ny fanodinkodinana ny volam-panjakana ho an’ny tombontsoa
manokana na politika.
NY AMIN’NY FANDAMINANA NY FANJAKANA
Andininy 40.- Ireto avy ny Andrim-panjakana :
ny Filohan’ny Repoblika sy ny Governemanta ;
ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona ;
Ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny
Fitsarana Avo no manatanteraka ny asam-pitsarana.
Andininy 41.- Ny lalàna no mamaritra ny habetsahana, ny fepetra ary ny fombafomba
fanomezana ny tambin-karama omena ireo olo-manan-kaja nantsoina hisahana andraikitra
maha olom-boafidy, na hamita asa, na hanatontosa iraka eo anivon’ireo Andrim-panjakana
voalazan’ity Lalàmpanorenana ity.
Alohan’ny hanatontosana ny asa na iraka sy hisahanana ny andraikiny dia mametraka
fanambaram-pananana manoloana ny Fitsaràna Avo Momba ny Lalàmpanorenana ireo
sokajin’olona voalazan’ny andàlana etsy ambony.
Tsy misy olona amin’ireo voalazan’ny andininy faha-40 mahazo mandray ivelan’ny zony
tamby na karama avy amin’olona na rafitra mizaka zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona,
vahiny na teratany, raha toa izany manakantsakana ny fanatontosany ara-dalàna ny andraikitra
nomena azy fa raha tsy izany dia aongana.
Ny lalàna no mamaritra ny fomba fampiharana ireo fepetra ireo indrindra ny amin’ny
famerana ny zo, ny tamby sy ny karama ary ny paika arahina amin’ny fanonganana.
Andininy 42.- Ny asa sahanina eny anivon’ny Andrim-panjakana dia tsy tokony ho zary
loharanon-karena tsy ara-drariny na fitaovana ampiasaina ho amin’ny tombontsoan'ny tena
Andininy 43.- Ny Filankevitra Ambony ho amin’ny Fiarovana ny Demokrasia sy ny
Fanjakana tan-dalàna no miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanajana ny toetra fototry ny
fahefana, ny demokrasia sy ny fanajàna ny Fanjakana tan-dalàna, ny fanaraha-maso ny
fampiroboroboana sy ny fiarovana ny zon’olombelona.
Ny lalàna no mamaritra ny fombafomba mikasika ny ho anisany sy ny fandaminana ary ny
fampandehanana ny Filankevitra Ambony.
NY AMIN’NY MPANATANTERAKA
Andininy 44.- Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny
Ny amin’ny Filohan’ny Repoblika
Andininy 45.- Ny Filohan’ny Repoblika no Filoham-panjakana.
Fidina hiasa mandritra ny dimy taona azo havaozina indray mandeha monja, amin’ny
alàlan'ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana izy.
Izy no miantoka, amin’ny fanelanelanany, ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny
fahefam-panjakana, ny fahaleovantenam-pirenena sy ny maha iray tsy anombinana ny
tanindrazana. Izy no mitandro ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena na eto antoerana na any ivelany. Izy no miantoka ny Firaisam-pirenena.
Ny Filohan’ny Repoblika no miantoka ireo asa ireo ao anatin’ny fahefana izay napetrak’ity
Lalàmpanorenana ity aminy.
Andininy 46.- Izay olona rehetra milatsaka hofidina ho Filohan’ny Repoblika dia tsy maintsy
mizaka ny zom-pirenena Malagasy, misitraka ny zon’ny isam-batan’olona sy ara-politika,
feno dimy amby telopolo taona farafahakeliny amin’ny vaninandro hifaranan’ny fametrahana
ny filatsahana hofidina, monina eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara enimbolana farafahakeliny mialohan’ny vaninandro farany ferana amin’ny fametrahana ny
Ny Filohan'ny Repoblika amperin'asa izay milatsaka hofidina amin’ny fifidianana ho
Filohan’ny Repoblika dia mametra-pialàna amin'ny toerany enimpolo andro alohan'ny
hanatanterahana ny fifidianana Filohan'ny Repoblika. Amin’io anton-javatra io, ny Filohan’ny
Antenimierandoholona no misahana ny anjara raharahan’ny Filohan’ny Repoblika
andavanandro mandra-panolorana ny fahefana amin’ny Filoha vaovao.
Raha toa ny Filohan’ny Antenimierandoholona ka milatsaka hofidina ihany koa, dia
iarahan’ny Governemanta misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.
Voarara ho an’ireo olo-manan-kaja rehetra misahana andraikitra maha-olom-boafidy na
manatanteraka asa eo anivon’ny Andrim-panjakana ary milatsaka hofidina amin’ny
fifidianana ho Filohan'ny Repoblika, ny mampiasa mba hanaovana fampielezan-kevitra ny
fitaovana na tombontsoa izay ananany noho ny asa ataony. Ny fandikana izany izay
voazahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fototra dia zary antony tsy
hampanan-kery ny filatsahana hofidina.
Andininy 47.- Ny fifidianana ny Filohan'ny Repoblika dia tanterahina telopolo andro
farafahakeliny ary enimpolo andro farafahabetsany alohan’ny fiafaran’ny fe-potoana
fiasan’ny Filoha am-perinasa.
Ireo fe-potoana ireo dia mihatra aorian’ny fahitana fototra ny fahabangan-toerana ambaran’ny
Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana amin’ireo toe-javatra voalazan’ny andininy faha52 sy faha-132 amin’ity Lalàmpanorenana ity,
Voafidy ho Filohan’ny Repoblika avy hatrany izay mahazo ny antsamanilan’ny vato manankery amin'ny fihodinana voalohany. Raha tsy tratra izany, dia asiana fihodinana faharoa ka
izay mahazo ny ampahany be indrindra amin’ny vato manan-kery no lany ho Filohan’ny
Repoblika amin’ireo mpilatsa-kofidina roa nahazo vato be indrindra tamin’ny fihodinana
voalohany. Ny fihodinana faharoa dia atao telopolo andro raha ela indrindra aorian’ny
fanambarana ofisialy ny vokatry ny fihodinana voalohany.
Raha misy ny fahafatesan’ny mpilatsaka hofidina alohan’ny fihodinana iray amin’ny
fandatsaham-bato, na koa misy toe-javatra hafa tsy azo anoharana voamarin’ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana ara-dalàna, dia ahemotra amin’ny vaninandro vaovao ny
fifidianana araka ny fepetra sy araky ny fombafomba izay ho faritana amin’ny alàlan'ny lalàna
Ny Filoha am-perinasa tsy nilatsaka hofidina amin’ny fifidianana dia mbola manohy ny asany
mandra-pahatongan’ny fotoana hanolorana fahefana ny mpandimby azy araka ny fepetra
voalazan’ny andininy faha-48.
Andininy 48.- Ny fanoloram-pahefana ofisialy dia atao eo amin’ny Filoha teo aloha sy ny
Filoha voafidy vaovao.
Alohan’ny handraisany ny asany, ny Filohan’ny Repoblika, amin’ny fotoam-pitsarana
manetriketrika ataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, eo anoloan’ny Firenena
sy eo anatrehan’ny Governemanta, ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona ary
ny Fitsarana Tampony, dia manao izao fianianana izao :
“ Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana
aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe
maha-Filohan’ny Firenena Malagasy ahy.
Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra
hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona.
Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny
lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka Malagasy tsy ankanavaka ”.
Manomboka ny andro nanaovana ny fianianana ny fe-potoana iasan’ny Filohan’ny Repoblika.
Andininy 49.- Ny asan’ny Filohan’ny Repoblika dia tsy azo ampirafesina aminà asampanjakana nahavoafidim-bahoaka, asa aman-draharaha hafa, asa ao anatin’ny antoko politika,
vondrona politika, na fikambanana, ary fisahanana andraikitra eo anivon’ny fikambanampivavahana.
Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity, voamarin’ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana, dia zary ho antony amin’ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho
an’ny Filohan’ny Repoblika.
Andininy 50.- Ny tsy fahafahana miasa miserana manjo ny Filohan’ny Repoblika noho ny tsy
fahafahana ara-batana na ara-tsaina hisahana ny asany izay voamarina ara-dalàna dia
ambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, rehefa nampakaran’ny
Antenimierampirenena ny raharaha, araka ny fanapahan-kevitra nolanian’ny roa
ampahatelon’ny mpikambana ao aminy.
Raha sendra misy tsy fahafahana miasa miserana dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona no
misahana vonjimaika ny asan’ny Filoham-panjakana.
Andininy 51.- Ny fanalàna ny tsy fahafahana miasa miserana dia tapahan’ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana, rehefa nanao fampakaran-draharaha ny Antenimiera.
Ny tsy fahafahana miasa miserana dia tsy tokony hihoatry ny telo volana, ka aorian’izay dia
azon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana atao ny manambara ny amin’ny
fanovàna ny tsy fahafahana miasa miserana ho tsy fahafahana miasa tanteraka aorian’ny
fampakaran-draharaha momba izany ataon’ny Antenimiera roa tonta izay manapaka amin’ny
latsabato misaraka ary nolanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy avy.
Andininy 52.- Aorian’ny fametraham-pialàna, fandaozana ny fahefana na amin’ny endriny
inona na amin’ny endriny inona, fahafatesana, ny tsy fahafahana miasa tanteraka na ny
fanonganana nambara, ny fahabangan’ny toeran’ny Filohan’ny Repoblika dia hozahan’ny
Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fototra.
Raha vao hita fototra ny fahabangan’ny toeran’ny Filohan’ny Repoblika, dia ny Filohan’ny
Antenimierandoholona no misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.
Raha misy tsy fahafahana miasa manjo ny Filohan’ny Antenimierandoholona hita fototry ny
Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, dia iarahan’ny Governemanta manontolo
misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.
Andininy 53.- Aorian’ny fizahana fototra ataon’ny Fitsarana Avo momba ny
Lalàmpanorenana ny fahabangan’ny toeran’ny Filohan’ny Repoblika, dia hisy ny fifidianana
Filohan’ny Repoblika vaovao atao ao anatin’ny 30 andro farafahakeliny ary 60 andro
farafahabetsany, araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-46 sy faha-47 amin’ny
Mandritry ny fe-potoana izay miantomboka amin’ny fahitana fototra ny fahabangan-toerana
ka hatramin’ny fotoana hanolorana ny fahefana amin'ny Filohan’ny Repoblika vaovao na
amin’ny fanesorana ny tsy fahafahana miasa miserana dia tsy azo ampiharina ny andininy
faha- 60, faha-100, faha-103, faha-162 ary faha-163 amin’ny Lalàmpanorenana.
Andininy 54.- Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny Praiminisitra araka ny tolotry ny
antoko na vondrona antoko maro an’isa ao amin’ny Antenimierampirenena.
Ny Filohan’ny Repoblika no mampitsahatra ny Praiminisitra amin’ny asany, aorian’ny
fanolorany ny fametraham-pialàn’ny Governemanta, na vokatry ny fahadisoana goavana, na
noho ny tsy fahombiazana azo tsapain-tànana.
Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny mambra ao amin’ny Governemanta sy
mampitsahatra azy ireo amin’ny asany, araka ny tolokevitra avy amin’ny Praiminisitra.
Andininy 55.- Ny Filohan’ny Repoblika no :
1° mitarika ny Filankevitry ny Minisitra ;
2° manao sonia ny hitsivolana noraisina teo amin’ny Filankevitry ny Minisitra araka ireo toejavatra sy fepetra voalazan’ity Lalàmpanorenana ity ;
3° manao sonia ny didim-panjakana notapahina teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra ;
4° manendry, eo anivon'ny Filankevitry ny Minisitra, amin’ny asam-panjakàna ambony izay
ferana amin’ny alàlan'ny didim-panjakana raisina eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra ny
5° afaka manapaka, eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra, momba ny raharaha rehetra
mavesan-danja mikasika ny Firenena, ny amin’ny hanontaniana mivantana ny hevitry ny
vahoaka amin’ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka ;
6° manoritra sy manapaka, eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra, ny politika ankapobe
7° manara-maso ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakàna voafaritra araka izany
sy ny asan’ny Governemanta;
8° mampiasa ireo ratsa-mangaika mpanara-maso ny Fitondran-draharaham-panjakana.
Afaka mamindra ny sasantsasany amin’ny fahefany amin’ny Praiminisitra ny Filohan’ny
Andininy 56.- Ny Filohan’ny Repoblika no Filoha Faratampon’ny Foloalindahy ka izy no
miantoka ny maha-iray tsy mivaky azy. Amin’izany dia ampian’ny Filankevitra Ambony
momba ny Fiarovam-pirenena izy.
Ny Filankevitra Ambony momba Fiarovam-pirenena, eo ambany fahefan’ny Filohan’ny
Repoblika, dia miandraikitra indrindra ny fitandroana ny fandriampahalemana sy ny
fandrindrana ny asa nankinin’ny Foloalindahy aminy mba hitandroana ny
fandriampahalemana eo amin’ny fiaraha-monina. Ny fandaminana izany sy ny anjara
raharahany dia faritana amin’ny alàlan'ny lalàna.
Ny Filohan’ny Repoblika no manapaka mandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny
handefasana miaramila sy fitaovana amin’ny firotsahana any ivelany rehefa avy naka ny
hevitry ny Filankevitra Ambony momba ny Fiarovam-pirenena sy ny Antenimiera.
Izy no manapaka ao amin’ny Filankevitry ny Minisitra ny tetika momba ny fiarovam-pirenena
eo amin’ny lafiny miaramila, toekarena, sosialy, kolontsaina, lafin-tany ary tontolo iainana.
Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny miaramila nantsoina hisolotena ny Fanjakana any
amin’ireo antokon-draharaha iraisam-pirenena.
Andininy 57.- Ny Filohan’ny Repoblika no manendry sy mampody ireo Masoivoho sy iraka
manokan’ny Repoblika any amin’ireo Firenena sy Fikambanana Iraisam-pirenena hafa.
Izy no mandray ny taratasy fanendrena sy fampodiana ny solontenan’ny Fanjakana sy ny
Fikambanana Iraisam-pirenena ankatoavin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Andininy 58.- Ny Filohan’ny Repoblika no manana fahefana hamindra fo amin'ireo voasazy.
Izy no manolotra ny mari-boninahitra sy ny fampisaloram-boninahitry ny Repoblika.
Andininy 59.- Ny Filohan’ny Repoblika no mamoaka hampanan-kery ny lalàna ao anatin’ny
telo herinandro manaraka ny fampitàn’ny Antenimierampirenena ny lalàna nolaniana
Alohan’ny fahataperan’io fe-potoana io, ny Filohan’ny Repoblika dia afaka mangataka
amin‘ny Antenimiera ny fandinihana indray ilay lalàna na ny andininy sasantsasany ao aminy.
Tsy azo làvina io fandinihina vaovao io.
Andininy 60.- Azon’ny Filohan’ny Repoblika atao ny mandrava ny Antenimierampirenena
rehefa avy nampahafantatra ny Praiminisitra, sy naka ny hevitr’ireo Filohan’ny Antenimiera.
Ny fifidianana ankapobe dia tanterahina ao anatin’ny enimpolo andro farafahakeliny ary
sivifolo andro farafahabetsany aorian’ny nanambarana ny fandravàna.
Ny Antenimierampirenena dia mivory avy hatrany ny alakamisy faharoa manaraka ny
fifidianana azy. Raha toa io fivoriana io ka atao ivelan’ny fe-potoana tokony hanatanterahana
fivoriana ara-potoana, dia hisokatra avy hatrany ary tanterahina mandritra ny dimy ambinifolo
andro ilay fotoam-pivoriana.
Tsy misy fandravàna vaovao azo atao ao anatin’ny roa taona manaraka ireo fifidianana ireo.
Andininy 61.- Raha tandindomin-doza ny Andrim-panjakan’ny Repoblika, ny
fahaleovantenam-pirenena, ny firaisam-pirenena na ny maha-iray tsy anombinana ny
Tanindrazana ka voatohintohina ny fizotra ara-dalànan’ny asan’ireo fahefam-panjakana dia
azon’ny Filohan’ny Repoblika atao ny manambara ampahibemaso ny fisian’ny toe-javatra
mampihotakotaka amin’ny faritra sasany na eo amin’ny Firenena manontolo, izany hoe ny
fotoam-pahamaizana, ny fahalatsahan’ny Firenena an-katerena na ny fampiharana lalàna
miaramila. Eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra no andraisan’ny Filohan’ny Repoblika ny
fanapahana amin’izany rehefa naka ny hevitry ny Filohan’ny Antenimierampirenena, ny
Filohan’ny Antenimierandoholona, ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana
Ny fanambarana ampahibemaso ny fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka dia manome
fahefana manokana ny Filohan’ny Repoblika ka lalàna fehizoro no mamaritra ny farafetrany
sy ny fahelany.
Raha vao nambara ampahibemaso fa misy ny toe-javatra mampihotakotaka dia azon’ny
Filohan’ny Repoblika atao ny manao lalàna amin’ny alàlan’ny hitsivolana.
Andininy 62.- Ny didy amam-pitsipika noraisin’ny Filohan’ny Repoblika, ankoatr’ireo toejavatra voalazan’ny andininy faha-54 andàlana voalohany sy faharoa, faha-58 andàlana
voalohany sy faharoa, faha-59, faha-81, faha-60, faha-94, faha-100, faha-114, faha-117 ary
faha-119 dia iarahany manao sonia amin’ny Praiminisitra ary, raha ilaina, iarahana amin’ny
Ny amin’ny Governemanta
Andininy 63. - Ny Governemanta dia ahitana ny Praiminisitra sy ny Minisitra.
Izy no manatanteraka ny politika ankapoben’ny Fanjakana.
Izy no tompon’andraikitra eo anoloan’ny Antenimierampirenena araka ny fepetra voalazan’ny
andininy faha-100 sy faha-103 etsy ambany.
Ny Governemanta no mampiasa ny Fitondran-draharaham-panjakana.
Andininy 64.- Ny asan’ny mambra ao amin’ny Governemanta dia tsy azo ampirafesina
amin’ny fisahanana ny asa maha-voafidim-bahoaka, ny andraikitra fisoloan-tena amin’ny asa,
ny fisahanana asa eo anivon’ny fikambanam-pivavahana, ny fisahanan'asam-panjakana
rehetra na ny asa aman-draharaha rehetra andraisan-karama.
Ny mambra rehetra ao amin’ny Governemanta, milatsaka hofidina amin’ny asa mahavoafidim-bahoaka, dia tsy maintsy mametra-pialàna amin’ny asany raha vao nambara fa azo
raisina ny filatsahany hofidina.
Andininy 65.- Ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta no :
1° mitarika ny politika ankapoben’ny Fanjakana ;
2° manana fahefana eo amin’ireo mambra ao amin’ny Governemanta izay izy no mitarika ny
asa, sy tompon’andraikitra amin’ny fandrindrana ny asan’ny minisitera ary koa ny
fanatanterahana ny fandaharanasam-pirenena rehetra momba ny fampandrosoana ;
3° manolotra volavolan-dalàna ;
4° manapaka ny volavolan-dàlana aroso hodinihin’ny Filankevitry ny Minisitra ary apetraka
eo amin’ny biraon'ny iray amin’ireo Antenimiera roa tonta ;
5° miantoka ny fanatanterahana ny lalàna ;
6° manana ny fahefana hanao didy amam-pitsipika na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny
andininy faha-55 andàlana faha-3;
7° manara-maso ny fampiharana ireo didim-pitsarana ;
8° mampakatra raharaha, raha ilaina, any amin’ny Fisafoan-draharaha Ankapoben'ny
Fanjakana sy ireo rantsa-mangaika hafa mpanara-maso ny Fitondran-draharaham-panjakana
sy manao izay hampandeha tsara ny raharaham-panjakana, ny fitantanana arak’izay tokony ho
izy ny volan’ny vondrombahoakam-panjakana sy ny an’ireo antokon-draharaham-panjakana ;
9° miantoka ny filaminana, ny fandriampahalemana ary ny maha-marin-toerana manerana ny
tanim-pirenena anatin’ny fanajana ny firaisam-pirenena ; amin'izany, izy no mampiasa ireo
hery rehetra miandraikitra ny filaminana, ny fitandroana ny fandriampahalemana, ny
filaminana anatiny ary ny fiarovana ;
10° raha misy korontana politika goavana ary alohan’ny hanambaràna fisian’ny toe-javatra
mampihotakotaka, dia afaka mampiasa ny mpitandro filaminana mba hamerina amin’ny
laoniny ny fandriampahalemana rehefa avy naka ny hevitry ny manam-pahefana ambony ao
amin’ny polisy, ny zandarimaria ary ny tafika, ny Filan-kevitra Ambony momba ny
Fiarovam-pirenena sy ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana,
11° Lehiben’ny fitondran-draharaham-panjakana ;
12° manendry amin’ny fisahanan’asa sivily sy miaramila ary koa amin’izay antokondraharaha miankina amin’ny Fanjakana, na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha55 andàlana faha-4.
Azony atao mamindra amin’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta ny ampahany
Izy no misahana ny fampandrosoana mifandanja sy mirindra eo amin'ny Vondrombahoaka Itsinjaram-pahefana rehetra.
Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ny andininy faha-55, nefa raha misy antony manokana, dia
azony atao, ny mitarika ny Filankevitry ny Minisitra araka ny fanomezam-pahefana
mazava tsara nomen‘ny Filohan’ny Repoblika sy araka ny lahadinika voafaritra.
Andininy 66.- Ny Praiminisitra no mitarika ny Filankevitry ny Governemanta.
Eo amin’ny Filankevitry ny Governemanta izy no :
1° mamaritra ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakana sy manapaka ny fepetra
ho raisina hiantohana ny fanatanterahana izany ;
2° misahana ny anjara raharaha hafa izay tsy maintsy hakàna ny hevitry ny Governemanta
araka ny voalazan‘ity Lalàmpanorenana ity sy ireo lalàna manokana ;
3° manapaka ireo fepetra fampiharana ny fandaharanasam-pirenena momba ny
fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ary koa ny amin’ny fanajariana ny tany, izay
novolavolaina miaraka amin’ny manampahefana any amin’ireo Vondrom-bahoaka
Andininy 67.- Ny didy amam-pitsipika raisin’ny Praiminisitra dia iarahany manao sonia
amin’ny Minisitra miandraikitra ny fanatanterahana izany, raha ilaina.
NY AMIN’NY MPANAO LALANA
Andininy 68.- Ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona no mandrafitra ny
Antenimiera. Izy no mandany ny lalàna sy manara-maso ny asan'ny Governemanta ary ny
fanaovana tombana ny politikam-panjakana.
Ny amin’ny Antenimierampirenena
Andininy 69.- Fidin’ny daholobe hiasa mandritry ny dimy taona amin’ny alàlan'ny
latsabato mivantana ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena ka izay mahazo
vato be indrindra no lany.
Ny fomba fanatanterahana ny latsabato dia ferana amin’ny alàlan'ny lalàna fehizoro.
Ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena dia mitondra ny anarana hoe:
« Solombavambahoakan’i Madagasikara ».
Andininy 70. – Didim-panjakana raisina eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra no mametra ny
isan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena, ny fitsinjarana toerana manerana ny
tanim-pirenena sy ny fizarazarana ny fari-pifidianana.
Andininy 71.- Tsy azo ampirafesina amin’ny andraikitra hafa maha-olom-boafidimbahoaka sy izay mety ho fisahanana asam-panjakana hafa ankoatra ny asa fampianarana ny
andraikitry ny solombavambahoaka.
Miato avy hatrany amin’ny maha olom-boafidy azy ny solombavambahoaka voatendry ho
mpikambana ao amin’ny Governemanta. Ny mpisolo toerana no misolo azy.
Manatanteraka ny asany araka ny feon’ny fieritreretany ary ao anatin’ny fanajàna ny
fitsipika fototra voafaritra araka ny fomba voadidy arahina ao amin’ny andininy faha-79 etsy
ambany ny solombavambahoaka.
Andininy 72.- Mandritra ny fe-potoana iasany, ny solombavambahoaka dia tsy afaka miova
vondrona politika mba hiditra any aminà vondrona vaovao, ankoatra ny anaran’ny vondrona
izay nahavoafidy azy, raha tsy izany dia aongana.
Raha misy ny fandikàna ny andàlana etsy aloha, dia ambaran’ny Fitsarana Avo momba ny
Lalàmpanorenana ny sazy fanonganana.
Ny solombavambahoaka voafidy ka tsy avy aminà antoko iray dia afaka miditra ao amin’ny
vondrona parlemantera araka ny safidiny eo anivon’ny Antenimiera.
Ny fananganana Solombavambahoaka iray dia azon’ny Fitsarana Avo momba ny
Ny fomba fanonganana sy ny fitsipika momba ny toetra fototra ary ny fitandroana ny hasin’ny
asa dia faritana amin’ny alàlan’ny lalàna mikasika ny antoko politika sy ny didy amampitsipika mikasika ny famatsiam-bola ny antoko politika.
Andininy 73.- Tsy misy solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina, karohina,
samborina, tànana am-ponja, na tsaraina noho ny hevitra naposany na latsabato nataony teo
am-panaovana ny asany.
Tsy misy Solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina sy samborina noho ny heloka
bevava na heloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny
Antenimiera, raha tsy hoe tratra ambodiomby.
Tsy misy solombavambahoaka na dia iray aza azo samborina ivelan’ny fotoam-pivoriana,
raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny Biraon’ny Antenimiera, raha tsy hoe tratra ambodiomby,
noho ny fanenjehana nomena alàlana na ny fanamelohana tanteraka.
Afaka manao fitarainana an-tsoratra any amin’ny Birao maharitry ny Antenimierampirenena
izay rehetra olona manana fanamarihana momba ny tsy fahavitan’ny solombavambahoaka
iray ny asa nankinina taminy. Tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipiriany mikasika ilay
raharaha ny Birao ao anatin’ny telo volana.
Andininy 74.- Fidina eo amin’ny fiandohan’ny fotoam-pivoriana voalohany ny Filoha sy ny
mpikambana ao amin’ny Birao mandritry ny fotoam-piasany .
Na izany aza noho ny antony lehibe, dia azo esorina amin’ny toerana misy azy ireo avy ny
mpikambana ao amin’ny Birao amin’ny alàlan’ny latsabato miafina ataon'ny roa
Andininy 75.- Mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierampirenena. Ny
faharetan’ny fotoam-pivoriana isanisany dia Ferana ho enimpolo andro.
Manomboka ny talata voalohany amin’ny volana mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny
talata fahatelo amin’ny volana oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana
indrindra amin’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Andininy 76.- Mivory tsy ara-potoana araka ny lahadinika voafaritra ny
Antenimierampirenena noho ny fitarihan’ny Praiminisitra, na noho ny fangatahan’ny antsasamanilan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena araka ny didim-panjakana
noraisin’ny Filohan’ny Repoblika teo amin’ny Filankevitry ny Minisitra.
Tsy mihoatra ny roa ambin’ny folo andro ny faharetan’ny fotoam-pivoriana. Na izany aza
anefa, raha vantany vao tapitra ny lahadinika izay niantsoana ny Antenimieram-pirenena,
dia faranana amin’ny alàlan'ny didim-panjakana ny fivoriana.
Andininy 77.- Ampahibemaso ny fivorian’ny Antenimierampirenena. Tanana an-tsoratra
izany, ary havoaka ho fantatry ny besinimaro araka ny fepetra voalazan’ny lalàna.
Mivory tsy ampahibemaso ny Antenimierampirenena araka ny fangatahana ataon’ny
ampahaefatry ny mpikambana ao aminy na ny fangatahana ataon’ny Governemanta.
Anaovana fitànana an-tsoratra ny fanapahana nofaranana.
Andininy 78.- Manao fivoriana manokana avy hatrany ny Antenimierampirenena ny
talata faharoa manaraka ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana azy mba hananganana
ny biraony sy ny fanamboarana ny vaomiera.
Manana zo amin’ny toeran’ny filoha lefitra iray ny mpanohitra ary mitarika ny iray amin’ireo
Mifarana ny fivoriana raha vao tapitra ny lahadinika.
Andininy 79.- Ny fitsipika mikasika ny fampandehanana ny Antenimierampirenena dia
faritan’ny lalàna fehizoro ao amin’ny foto-kevitra ankapobe sy faritan’ny fitsipika anatiny
ao amin’ny fombafomba arahiny. Avoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika ny
Ny amin’ny Antenimierandoholona
Andininy 80.- “Loholon’i Madagasikara” no anarana entin’ireo mpikambana ao amin’ny
Antenimierandoholona. Dimy taona no fe-potoana iasany, afa-tsy amin’izay mikasika ny
Filohan’ny Antenimierandoholona, ho fampiharana ny andininy faha-46 andalana faharoa
amin’ity Lalàmpanorenana ity.
Andininy 81.- Ny Antenimierandoholona no misolo tena ireo Vondrom-bahoaka Itsinjarampahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy. Izany dia ahitana, ho
an’ny roa ampahatelony, mpikambana voafidy mitovy isa ho an’ny Faritany tsirairay, ny iray
ampahatelony dia mpikambana tendren’ny Filohan’ny Repoblika, ny ampahany araka ny
fanolorana ataon’ny vondrona izay mahasolo-tena be indrindra avy amin’ny hery aratoekarena sy ara-tsosialy ary ara-kolontsaina, ny ampahany noho ny fahaizana manokana.
Andininy 82.- Lalàna fehizoro no mamaritra ny fitsipika momba ny fampandehanandraharaha sy ny firafitry ny Antenimierandoholona. Torak’izany koa ny fomba fifidianana sy
fanendrena ny mpikambana ao aminy.
Andininy 83.- Maka ny hevitry ny Antenimierandoholona ny Governemanta momba ny
raharaha ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ny fandaminana ny Vondrom-bahoaka Itsinjarampahefana.
Andininy 84.- Mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierandoholona. Enimpolo
andro no faharetan’ny fotoam-pivoriana.
Afaka manao fotoam-pivoriana manokana ihany koa izy araka ny fiantsoana ataon’ny
Governemanta. Ny lahadinika amin’izany dia ferana amin'ny alàlan'ny didim-panjakana
fiantsoana izay noraisana teo amin’ny Filankevitry ny Minisitra.
Rehefa tsy mivory ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona dia tsy afaka
mandinika afa-tsy ny raharaha nangatahin’ny Governemanta ny heviny, afa-tsy izay
Andininy 85.- Ny fepetra voalazan’ny andininy faha-71 hatramin’ny faha-79 dia ampiharina
amin’ny Antenimierandoholona ihany koa.
NY AMIN’NY FIFANDRAISAN’NY GOVERNEMANTA SY NY ANTENIMIERA
Andininy 86.- Samy manam-pahefana
Solombavambahoaka ary ny Loholona.
hanolotra volavolan-dalàna ny Praiminisitra, ny
Dinihina eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra ny volavolan-dalàna ary apetraka amin’ny
birao iray amin’ireo biraon’ny Antenimiera roa.
Ny lahadiniky ireo Antenimiera dia ahitana araka ny laharampahamehana sy araka ny
lahadinika faritan’ny Governemanta, ny ady hevitra momba ny volavolan-dalàna napetraky ny
Praiminisitra teo amin’ny Biraon’ny Antenimierampirenena na teo amin’ny Biraon’ny
Ny tolo-dalàna sy ny fanitsiana napetraky ny mpikambana ao amin’ny Antenimiera dia
ampahafantarina ny Governemanta, izay manana fe-potoana telopolo andro ho an’ny tolodalàna ary dimy ambin’ny folo andro amin’ny fanitsiana mba hanaovany fanamarihana.
Rehefa tapitra izany fe-potoana izany, dia miroso amin’ny fandinihana ny tolo-dalàna sy ny
fanitsiana mba handaniana azy ny Antenimiera nametrahana izany.
Tsy azo raisina ny tolo-dalàna na ny fanitsiana raha toa ny fandaniana azy ireo ka misy
fiatraikany eo amin’ny sehatry ny fanatanterahana ny tetibola an-dalam-panatanterahana, na
ny fihenan’ny loharam-bolam-panjakana na ny fitambesaran’ny lolohan’ny Fanjakana, afa-tsy
izay mikasika ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Raha hita mandritra ny fomba arahina amin’ny fanaovan-dalàna fa tsy tafiditra ao anatin’ny
faritra sahanin’ny lalàna ny tolo-dalàna sy ny fanitsiana dia afaka manohitra ny tsy fahazoana
mandray izany ny Governemanta. Raha misy ny tsy fifanarahana eo amin’ny Governemanta
sy ny Antenimierampirenena na ny Antenimierandoholona , dia mamoaka didy ao anatin’ny
valo andro ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana araka ny fangatahana ataon'ny
Praiminisitra na ny Filohan’ny iray amin’ireo Antenimiera mpanao lalàna.
Fotoam-pivoriana herinandro roa amin’ny efatra farafahakeliny no atokana handinihina ireo
rijan-teny sy ireo adi-hevitra izay nangatahin’ny Governemanta ho soratana eo amin’ny
Andininy 87.- Ny Antenimiera no mandany ny lalàna fehizoro, ny lalàna mifehy ny
fitantanam-bola ary ny lalàna tsotra araka ny fepetra faritan’ity Lalàmpanorenana ity.
Andininy 88.- Ankoatra ireo anton-javatra ampisahanan’ny andininy hafa ao amin’ny
Lalàmpanorenana azy, dia lalàna fehizoro ihany no mametra :
1° ny fitsipika mikasika ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ;
2° ny fombafomba amin’ny fandatsaham-bato mikasika ny fifidianana solombavambahoaka,
ny fepetra ahafahana milatsaka hofidina, ny fomba itondrana ny tsy fampirafesana ny asa
aman-draharaha sy ny fanonganana, ny fitsipika momba ny fanoloana raha misy fahabangantoerana, ny fandaminana ary ny fampandehanana ny Antenimierampirenena ;
3° ny fombafomba amin’ny fandatsaham-bato mikasika ny fifidianana Loholona, ny fepetra
ahafahana milatsaka hofidina, ny fomba itondrana ny tsy fampirafesana ny asa aman22
draharaha sy ny fanonganana, ny fitsipika momba ny fanoloana raha misy fahabangantoerana, ny fandaminana ary fampandehanana ny Antenimierandoholona ;
4° Ny fitsipika mifehy ny fahefana, ny fomba fandaminana sy ny fampandehanana ny
Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ary koa ny fitsipika mifehy ny fitantanana ny
5° ny fandaminana, ny firafitra, ny fampandehanan-draharaha ary ny andraikitry ny Fitsarana
Tampony sy ireo Fitsaran-dehibe telo mandrafitra azy. Toa izany koa ny mikasika ny
fanendrena ireo mpikambana ao aminy sy ireo izay mikasika ny paika arahina eo anatrehany;
6° ny sata mifehy ny Mpitsara;
7° ny fandaminana sy ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny Filankevitra Ambony
momba ny Mpitsara ;
8° ny fandaminana, ny fampandehanana, ny anjara raharaha, ny fampakaran-draharaha ary ny
paika ady arahina manoloana ny Fitsarana Avo ;
9° ny fandaminana, ny fampandehanana, ny anjara raharaha, ny fampakaran-draharaha ary ny
paika arahina manoloana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ;
10° ny Fehezan-dalàna momba ny fifidianana ;
11° ny fepetra ankapobe mikasika ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ;
12° ny fepetra ankapobe mikasika ny Fifampiraharaham-barotra amin’ny Fanjakana amin’ny
harena an-kibon’ny tany;
13° ny fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka ary koa ny famerana ny fahafahan’ny vahoaka,
ny isam-batan’olona ary iombonana mandritra izany fotoana izany ;
14° ny fepetra fampitoviana ara-bola hisian’ny tombom-pitoviana eo amin’ny samy vondrombahoakam-paritra.
Andininy 89.- Ny lalàna fehizoro dia laniana sy ovàna araka ireto fepetra manaraka ireto :
1° ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna dia tsy aroso hotapahina sy holanian’ny Antenimiera
voalohany nandray azy raha tsy tapitra ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro aorian’ny
nametrahana azy ;
2° ny paika arahina voalazan’ny andininy faha-86, faha-96 ary faha-98 no ampiharina. Na
izany aza anefa, tsy maintsy ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimiera
tsirairay no mandany ny lalàna fehizoro, raha misy ny tsy fifanarahan-kevitra eo amin’ny
Antenimiera roa tonta izay samy efa nandinika izany indroa, dia ny Antenimierampirenena
amin’ny alàlan'ny latsabato iadanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy no
mandray fanapahan-kevitra farany.
Raha toa ka tsy nolanian’ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna fehizoro alohan’ny
fiafaran’ny fotoam-pivoriana dia azo ampiharina amin’ny alàlan'ny hitsivolana ny fepetra
entin’io volavolan-dalàna io, ka ampidirina ao raha ilaina izany, ny iray na maromaro
amin’ireo fanitsiana nolanian’ny Antenimiera iray.
3° tsy maintsy mitovy ny fenitra andanian’ny Antenimiera roa tonta ny lalàna fehizoro
mikasika ny Antenimierandoholona.
Tsy azo avoaka hanan-kery ny lalàna fehizoro raha tsy efa nambaran’ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana fa mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana.
Andininy 90.- Ao anatin’ny faritry ny lalàna fehizoro ampiharina mikasika izany, ny lalàna
mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana dia :
1° mamaritra ny loharanom-bola sy ny lolohan’ny Fanjakana araka ny fepetra sy araka ny
voalazan’ny lalàna fehizoro ;
2° mamaritra ho an’ny taom-piasana ny karazana, ny habetsahana, ary ny fanokanana ny
loharanom-bola sy ny lolohan’ny Fanjakana ary koa ny fifandanjana eo amin’ny teti-bola sy
ny vola vokatr’izany araka ny fanerena eo amin’ ny lafiny toe-karena faobe.
3° mamaritra ny tahan’ny fidiram-bola tokony hiverina amin’ny Fanjakana sy ny Vondrombahoaka Itsinjaram-pahefana ary koa ny karazana sy ny tahan’ny hetra sy ny haba ambony
indrindra raisina mivantana ho an’ny tetibolan’izany vondrom-bahoaka izany faritana eo
amin’ny Filankevitry ny Minisitra.
Ny lalàna fehizoro no mamaritra ny fomba fampiharana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity
ary koa ny fepetra momba ny fampitoviana ny vola hisian’ny tombom-pitoviana eo amin’ny
samy Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana.
Ny lalàna no mamaritra mazava ny fepetra fisamboram-bola sy manapaka ny mety ho
fananganana ny tahiry.
Ny lalàna no mamaritra:
- Ny fombafomba fampiasana ny tahiry fisamboram-bola avy any ivelany sy ny
fanaraha-maso ataon’ny Antenimiera sy araka ny lalàna;
- Ny fomba fitondrana ny andraikitry ny tena manokana sy ara-bolan’ny fahefana
momba ny fitantanam-bola, tompo-mariky ny fanodinkodinana ny vola nosamborina ary koa
ny tsy fidiran’ny Fanjakana andraikitra amin’izany.
Andininy 91.- Ny lalàna momba ny fandaharanasa no mamaritra ny tanjona kendrena
amin’ny asa ataon’ny Fanjakana mikasika ny toekarena, tontolo iainana, sosialy ary
fanajariana ny tany.
Ny fepetra voalazan’ity andininy ity dia soritana mazava sy fenoina amin’ny alàlan'ny lalàna
Andininy 92 .- Mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa no andinihan’ny Antenimiera ny
volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola no manomana ny volavolandalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ka eo ambany fahefan’ny Praiminisitra,
Lehiben’ny Governemanta no anaovany izany.
Manana fe-potoana enimpolo andro farafahabetsany ny Antenimiera handinihana izany.
Manana fe-potoana telopolo andro farahahabetsany manomboka eo amin’ny fotoana
nanolorana ny volavolan-dalàna taminy ny Antenimierampirenena mba handinihana azy
am-boalohany. Rehefa tsy naneho ny heviny tao anatin’izay fe-potoana izay izy, dia heverina
ho toy ny efa nandany azy sahady ka dia atolotra ny Antenimierandoholona indray ilay
Mitovy amin’izay fepetra izay ihany, dia manana fe-potoana dimy ambin’ny folo andro
manomboka ny fampitana ny volavolan-dalàna ny Antenimierandoholona mba
handinihany azy am-boalohany ary ny Antenimera tsirairay dia manana fe-potoana dimy
andro hanaovany ny fandinihana azy manaraka.
Raha misy iray amin’ireo Antenimiera tsy maneho ny heviny tao anatin’ny fe-potoana
voatondro, dia heverina ho toy ny efa nanao latsabato nanekena ilay rijan-teny natolotra ho
Raha tsy nolanian’ny Antenimiera alohan’ny fiafaran’ny fotoam-pivoriana faharoa ny
volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bola, dia ampidirina ao ny fanitsiana iray na
maromaro neken’ny Antenimiera roa tonta.
Izay fanitsiana rehetra natao tamin’ilay volavolan-dalàna momba ny tetibola ka miteraka
fitomboan’ny fandaniana na fihenan’ny loharanom-bolam-panjakana dia tsy maintsy
ampiarahina amin’ny tolo-kevitra momba ny fampitomboana ny vola miditra na ny toekarena
Raha tsy napetraka ara-potoana mba holaniana alohan’ny fiantombohan’ny taom-piasana ny
volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana amin’ny taom-piasana iray, dia
omena alàlana ny Praiminisitra ahazoany manao ny famoriana ny hetra ary manokatra
amin’ny alàlan'ny didim-panjakana ny sorabola mifandraika amin’ireo asa nolaniana tamin’ny
Lalàna fehizoro no mamaritra ny fomba fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny
Andininy 93. - Ny Fitsarana momba ny Kaonty no manampy ny Antenimiera amin’ny
fanaraha-maso ny asa ataon’ny Governemanta. Manampy ny Antenimiera sy ny
Governemanta amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanambolam-panjakana ary koa amin’ny fanombanana ny politikam-panjakana izy. Amin’ny
fifandraisany amin’ny vahoaka, izy dia mandray anjara amin’ny fampahafantarana ny olompirenena.
Ny kaontin’ny Fitondran-draharaham-panjakana dia tokony ho ara-dalàna sady marina.
Manome endrika azo itokiana amin’ny vokatry ny fitantanany, ny fananany ary ny toe-bola
Andininy 94. – Ny Filohan’ny Repoblika no mifandray amin’ny Antenimiera amin’ny
alàlan'ny hafatra tsy azo iadian-kevitra.
I- Ny lalàna no mametra ny fitsipika mikasika :
1° ny zon’ny olom-pirenena sy ny antoka fototra nomena ny tsirairay, fikambanana, antoko
politika ary ny vondrona hafa rehetra ho amin’ny fampiasana ny zo sy ny fahalalahana ary
koa ny adidy aman’andraikitr’izy ireo ;
2° ny fifandraisana iraisam-pirenena ;
3° ny zom-pirenena ;
4° ny Banky Foibe sy ny fomba ny famoaham-bola ;
5° ny fivezivezen’ny olona ;
6° ny fitsipika mikasika ny paika arahina amin’ny ady madio sy ny raharaham-barotra ;
7° ny fitsipika mikasika ny paika arahina amin’ny ady atao amin’ny Fanjakana sy ny paika
arahina amin’ny fitantanam-bolam-panjakana ;
8° ny famaritana ny heloka bevava sy ny heloka tsotra ary koa ny sazy ampiharina
amin’izany, ny paika ady heloka, ny famotsoran-keloka ;
9° ny fitsipika mikasika ny fifanoheran’ny lalàna sy ny an’ny fahefana ;
10° ny fananganana rafi-pitsarana vaovao sy ny fahefana tandrify azy avy ary koa ny
fandaminana sy ny fitsipika mifehy ny paika arahina izay ampiharina amin’izany ;
11° ny fandaminana ny fianakaviana, ny sata sy ny fizakan-jon’ny isam-batan’olona, ny
fehin’ny fanambadiana, ny fandovana sy fanomezana ;
12° ny fifehezana araka ny lalàna ny fitompoana, ny fizakà-manana, ny adidy ateraky ny zo
isam-batan’olona sy ny ara-barotra ary ny fepetra ahazoana manaisotra amin’ny tompony ny
fananany na ny fampiasana azy tsy azo lavina noho ny filan’ny besinimaro na ny famindrana
ny fitompoana azy amin’ny Fanjakana ;
13° ny fananganana ny sokajin’antokon-draharaham-panjakana ;
14° ny sata sy ny fitondrana ny fizakan-tenan’ireo Oniversite, ary koa ny sata mifehy ny
mpampianatra eny amin’ny fampianarana ambaratonga ambony ;
15° ny sori-dàlana lehibe amin’ny fanomezan-danja ny fampianarana ambaratonga fototra sy
16° ny loharanon-karena iankinan’ny fiainam-pirenena;
17° ny fandaminana sy ny fampandehanana ny Vondrombahoakam-paritra itsinjarampahefana ;
18° ny sata manokan’ny Renivohitry ny Repoblika, ny ampahany sasantsasany amin’ny
tanim-pirenena, ireo lapam-panjakana sy ireo trano isan’ny fananam-panjakana, ireo seranana
sy ny zotram-pifamoivoizana, ireo seranam-piaramanidina, ary koa ny satan’ireo harena andranomasina ;
19° ny karazana, ny fototra ary ny taha farany ambony amin’ny hetra sy haba any amin’ny
Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ;
20° ny Filankevitry ny Andrin’ny Mari-boninahitra Malagasy ;
21° ny fanatsarana ny tanàna sy ny fonenana ;
22° ny fepetra amin’ny fisitrahan’ny vahiny tany ;
23° ny fepetra famindrana amin’ny Fanjakana ny tany tsy nohamaintisamolaly ;
24° ny fandaminana ny fampandehanana ary anjara raharahan’ny Fisafoan-draharahampanjakana Ankapobe ary ireo rantsana hafa momba ny fanaraha-maso ny Fitondrandraharaham-panjakana.
II- Ny lalàna no mamaritra ny foto-kevitra ankapobe momba :
1° ny fandaminana ny fiarovam-pirenena sy ny fampiasan’ireo manam-pahefana sivily ny
Foloalindahy na ny Hery mpitandro ny filaminana ;
2° ny sata ankapobe mifehy ny mpiasam-panjakana sivily sy miaramila eto amin'ny Firenena
ary ny mpiasam-panjakana any amin’ny faritra;
3° ny lalàna mifehy ny asa, ny zo sendikaly, ny zo hitokona ary ny fitsinjovana ara-tsosialy ;
4° ny famindrana ny fananan’ny orinasa na antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana
amin’olon-tsotra na ny mifamadika amin’izany ;
5° ny fandaminana na ny fampandehanana ny sehatrasa samihafa misahana lalàna, toekarena,
sosialy ary kolontsaina ;
6° ny fiarovana ny tontolo iainana.
III- Ny fivorian’ny Antenimiera roa tonta mitambatra ho Kongresy irery, amin’ny alàlan'ny
latsabato iandanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana rehetra ao anatiny, no afaka manome
alàlana hamakiana ady amin’ny firenen-kafa.
Andininy 96.- Ny volavolan-dalàna sy ny tolo-dalàna rehetra dia dinihin’ny Antenimiera
nandray azy voalohany vao ampitaina any amin’ny Antenimiera ankilany.
Ifandimbiasan’ny Antenimiera roa tonta ny ady hevitra mandra-pisian’ny fandaniana rijanteny tokana.
Raha toa ka tsy mety lany ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna iray rehefa nodinihin’ny
Antenimiera tsirairay indroa ka misy tsy fifanarahan-kevitra tamin’izy roa tonta, na rehefa
nodinihin’ny Antenimiera tsirairay indray mandeha rehefa nanambara ny fisian’ny hamehana
ny Governemanta, dia afaka mandray fanapahan-kevitra ny Praiminisitra hamory vaomiera
ikambanana isasahana izay ampiandraiketina fanolorana rijan-teny momba ireo fepetra mbola
iadian-kevitra. Ny rijan-teny novolavolan’io vaomiera ikambanana io dia azon’ny
Governemanta atolotra ny Antenimiera roa tonta mba hankatoavina. Tsy misy fanitsiana azo
raisina raha tsy nahazoana ny faneken’ny Governemanta.
Raha toa ka tsy afaka mandany rijan-teny tokana iombonana ny vaomiera na tsy nolaniana
araka ireo fepetra voalaza ao amin’ny andalana etsy aloha ilay rijan-teny, dia ny
Antenimierampirenena, amin’ny alàlan'ny latsabato iandanian’ny antsasa-manilan’ny
mpikambana ao aminy no manapa-kevitra farany.
Andininy 97.- Manana endrika didy amam-pitsipika ny raharaha hafa tsy tafiditra ao
anatin'ny faritra sahanin'ny lalàna. Azo ovàna amin’ny alàlan'ny didim-panjakana izay avoaka
rehefa milaza ny heviny ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ireo rijan-teny
miendrika lalàna tafiditra ao anatin'izany raharaha izany.
Ireo rijan-teny miendri-dalàna mety ho raisina, rehefa manan-kery ity Lalàmpanorenana ity
dia tsy azo ovàna amin’ny alàlan'ny didim-panjakana raha tsy nambaran’ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana fa miendrika didy amam-pitsipika izany araka ny voalazan’ny
andalana etsy aloha.
Andininy 98.- Ny Governemanta, raha manamby ny andraikitra araka ny fepetra voalazan’ny
andininy faha-100 etsy ambany, dia afaka mitaky amin’ny Antenimiera tsirairay mba hanapakevitra avy amin’ny alàlan’ny latsabato tokana mikasika ny fepetra manontolo na ampahany
voalazan’ny rijan-teny iadian-kevitra :
- mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana, raha toa ka voatolotra valo amby efapolo ora
mialoha ny fisokafan’ny fivoriana ireo rijan-teny ireo ;
- ao anatin’ny valo andro farany amin’ny fotoam-pivoriana ara-potoana tsirairay avy.
Andininy 99.- Ao anatin’ny telopolo andro nanendrena azy no anoloran’ny Praiminisitra ny
fandaharan’asany momba ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakana amin’ny
Antenimiera izay afaka manome tolo-kevitra.
Raha tsapan’ny Governemanta eo am-panatanterahana ny asa fa misy fanovàna fototra tokony
hatao amin’io fandaharanasa io, dia entin’ny Praiminisitra eny amin’ny
Antenimierampirenena izay afaka manome tolo-kevitra izany fanovàna izany.
Andininy 100.- Aorian’ny fandinihana nataon’ny Filankevitry ny Minisitra, dia azon’ny
Praiminisitra atao ny manamby ny andraikitry ny Governemantany amin’ny fametrahana
Tsy azo atao ny fandatsa-bato raha tsy afaka valo amby efapolo ora aorian’ny fametrahana ny
fangataham-pitokisana. Raha toa ka ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao amin’ny
Antenimierampirenena no mitsipaka ny fangataham-pitokisana dia mametraka ny fialany
amin’ny Filohan’ny Repoblika ny Governemanta.
Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny Praiminisitra araka ny andininy faha-54.
Andininy 101.- Isaky ny fiandohan’ny fivoriana ara-potoana voalohany no anoloran’ny
Governemanta amin’ny Antenimierampirenena ny tatitra momba ny fanatanterahana ny
Arahina adihevitra mahakasika ny asan’ny Governemanta sy ny fanombanana ny politikampanjakana ny fanolorana.
Andininy 102.- Ny fomba ampiasain’ny Antenimiera ahafantarany ny asa sahanin’ny
Governemanta dia ny fanontaniana am-bava, ny fanontaniana an-tsoratra, ny fanadinana
hentitra ary ny fampiasana ny vaomiera mpanao famotorana.
Fivoriana iray isaky ny dimy ambin’ny folo andro farafahakeliny, ka anatin’izany ny
fivoriana atao mandritra ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalazan’ny andininy faha 76
dia atokana ho an’ny fanontanian’ireo mpikambana ao amin’ny Antenimiera sy ireo valiny
avy amin’ny Governemanta .
Fivoriana telo andro isam-bolana no atokana ho amin’ny lahadinika izay notapahin’ny
Antenimiera tsirairay araka ny fitarihan’ny vondron’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimiera
voakasika ary koa avy ny an’ny vodron’ireo vitsy an’isa.
Andininy 103.- Azon’ny Antenimierampirenena atao ny maneho tsy fankasitrahana ny
andraikitry ny Governemanta amin’ny alàlan'ny latsabato fitsipaham-pitokisana.
Tsy azo raisina anefa ny tolo-kevitra toy izany raha tsy ny antsasaky ny mpikambana ao
amin’ny Antenimierampirenena no manao sonia azy. Valo amby efapolo ora aorian’ny
fametrahana ny tolo-kevitra hotapahina vao azo atao ny latsabato.
Tsy lany ny fitsipaham-pitokisana raha tsy ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny
Antenimierampirenena no mankato azy.
Raha lany izany fitsipaham-pitokisana izany dia mametraka ny fialany amin’ny Filohan’ny
Repoblika ny Governemanta .
Andininy 104.- Ny Antenimiera amin’ny alalan’ny latsa-bato ataon’ny antsasa-manilan’ny
mpikambana mandrafitra ny Antenimiera tsirairay dia afaka mamindra ny fahefany amin’ny
Filohan’ny Repoblika hanao lalàna mandritra ny fotoana voafetra sy mikasika toe-javatra
Ny fanomezam-pahefana dia manome alàlana ny Filohan’ny Repoblika handray fepetra
amin’ny ankapobeny momba ny toe-javatra mahakasika ny sehatry ny lalàna, amin’ny
alalan’ny hitsivolana raisina eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra.
NY AMIN’NY FILANKEVITRA ARA-TOEKARENA, ARA-TSOSIALY ARY ARAKOLONTSAINA
Andininy 105.- Ny Filankevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina izay
ampakaran’ny Governemanta raharaha, no manome ny heviny mikasika ny volavolan-dalàna,
hitsivolana na didim-panjakana ary koa mikasika ireo tolo-dalàna izay naroso hodinihiny.
Manam-pahefana izy handinika ny volavolà sy tolo-dalàna manana endrika ar-toekarena aratsosialy ary ara-kolontsaina ankoatra ny lalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana
Afaka mandray amin’ny alalan’ny tenany manokana ireo fandinihana na famotopotorana
rehetra mikasika ireo raharaha ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina izy. Ampitaina
any amin’ny Filohan’ny Repoblika ny tatitra ataony.
Ny firafitra, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny Filan-kevitra ara-toekarena, aratsosialy ary ara-kolontsaina dia Ferana amin’ny alalan’ny lalàna fehizoro.
NY AMIN’NY FITSARANA
Andininy 106.- Eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara, ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana
Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no mitsara araka ny
Lalàmpanorenana sy araka ny lalàna, amin’ny anaran’ny Vahoaka Malagasy.
Andininy 107.- Ny Filohan’ny Repoblika no miantoka ny fahaleovantenan’ny fitsarana.
Amin’izany izy, dia ampian’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara izay izy no
Ny Minisitra misahana ny Fitsarana no Filoha lefitra
Ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara, rantsa-mangaika miandraikitra ny fiarovana,
ny fitantanana ny fiainan’ny mpiasa manao ho anton-draharaha ny asa sy ny famaizana ny
mpitsara no miandraikitra ny :
fitandroana indrindra indrindra ny fanajana ny lalàna sy ireo fepetra raketin’ny sata
mifehy ny Mpitsara,
fanaraha-maso ny fanajana ny fitsipika momba ny fitandroana ny hasin’ny asa
amin’ny maha mpitsara ,
fanomezana torolàlana hanatsarana ny fomba fitantanan-draharaham-pitsarana,
indrindra amin’izay mikasika ny fepetra eo amin’ny lafin’ny lalàna na didy
amam-pitsipika mikasika ny antokom-pitsarana sy ny Mpitsara.
Ny mambra ao amin’ny Governemanta, ny Antenimiera, ny Filankevitra Ambony momba ny
fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna, ny Lehiben’ny Fitsarana ary koa ny
fikambanana natsangana ara-dalàna dia afaka mitondra ny raharaha manoloana ny
Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara.
Ny fitsipika mikasika ny fandaminana, ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny
Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara dia ferana amin’ny alàlan'ny lalàna fehizoro.
Andininy 108. - Eo amin’ny asam-pitsarana sahaniny dia mahaleotena ny Mpitsara
mpamoaka didy, ny mpitsara sy mpitsara mpanampy ka ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna
ihany no mifehy azy ireo.
Amin'izany, ankoatra ny toe-javatra voalazan’ny lalàna ary na dia eo aza ny fahefana arapitsipi-pifehezana, dia tsy azo tohintohinina na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona
izy ireo amin’ny asam-pitsarana ataony ho fisahanana ny andraikiny
Andininy 109.- Ny mpitsara mpamoaka didy dia tsy azo hetsehina amin’ny toerany ; manao
ny asa mifanentana amin’ny toerana tokony hisy azy araka ny laharany ; tsy azo afindra
toerana raha tsy misy fanekena avy aminy afa-tsy hoe misy antony ilàna izany amin’ny asa,
voamarin’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara ara-dalàna.
Andininy 110.- Ny Mpitsara ao amin’ny Fampanoavana dia fehezin’ny ambaratongampahefana ; na izany aza anefa, ao amin’ny fehin-teny na fitakiana am-bava ataony, dia izay
feon’ny fieritreretany sy araka ny lalàna no mibaiko azy. Mampiasa ireo mpiandraikitra ny
fikarohana fandikan-dalàna izay ahafahany manara-maso ny asa sy ny fampandehanandraharaha izy.
Ny fangatahana azy ireo hanatanteraka zavatra hita miharihary fa mifanohitra amin’ny lalàna
dia mitarika fanasaziana araka ny lalàna ho an’ireo mpampanao izany.
Andininy 111.- Ny fanaovana ny asa maha Mpitsara dia tsy azo ampirafesina amin’ny asa
sahanina eo anivonà antoko politika sy eo anivon’ny Governemanta, amin’ny asa
fanatanterahana andraikitry ny olom-boafidy eo anivon’ny vahoaka na izay rehetra mety ho
fisahanana asa aman-draharaha ahazoam-bola, afa-tsy ny asa fampianarana.
Ny mpitsara amperinasa rehetra dia tsy mahazo maka fiandaniana ara-politika.
Ny mpitsara misahana andraikitra maha olom-boafidy dia heverina ho toy ny nafindra hanao
Andininy 112.- Ny Fisafoan-draharaha Ankapoben’ny Fitsarana, ahitana ny solontenan’ny
Antenimiera, ny solontenan’ny Governemanta ary ny solontenan’ny Filankevitra Ambony
momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna ary ny solontenan’ny
Mpitsara no miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanajana ny fitsipika manokana momba ny
fitandroana ny hasin’ny asa amin’ny maha Mpitsara, ary koa ny fihetsika ataon’ny
Miankina amin’ny Fiadidiana ny Repoblika izy.
Ny Filohan’ny Repoblika, ny Antenimiera, ny Governemanta, ny Lehiben’ny Fitsarana, ny
fikambanana natsangana ara-dalàna ary ny olona rehetra manana tombontsoa amin’izany dia
afaka mitondra fitarainana manoloana ny Fisafoan-draharaha ankapobe ny Fitsarana.
Fisafoan-draharaha ankapobe ny Fitsarana dia ferana amin’ny alàlan'ny lalàna.
Andininy 113.- Ny Filan-kevi-pirenena momba ny Fitsarana, rantsa-mangaika fakan-kevitra
ahitana ny Filoha Voalohany ao amin’ny Fitsarana Tampony, Filoha, ny Tonia Voalohany
Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony, sy ireo Lehiben’ny Fitsarana Ambony sy
Fitsarana Tampony, ny solontenan’ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna,
ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara,
ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna ary
ny mpiasan’ny fitsarana amin’ny ankapobeny. Amin’izany, izy dia afaka manolotra amin’ny
Governemanta ny fepetra eo amin’ny lafiny lalàna na didy amam-pitsipika mikasika ny
fandaminana sy fampandehanana ny antokom-pitsarana, ny sata mifehy ny Mpitsara sy ny
Filankevi-pirenena momba ny Fitsarana dia ferana amin’ny alàlan'ny lalàna.
NY AMIN’NY FITSARANA AVO MOMBA NY LALÀMPANORENANA
Andininy 114.- Misy mpikambana sivy ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny
Lalàmpanorenana. Ny fe-potoana iasany dia fito taona tsy azo havaozina.
Mpikambana telo amin’izy ireo no tendren’ny Filohan’ny Repoblika, roa fidin’ny
Antenimierampirenena, roa fidin’ny Antenimierandoholona, ary roa fidin’ny Filankevitra
Ambony momba ny Mpitsara.
Ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia fidin’ny mpikambana
amin’ireo mpikambana ao amin’io Fitsarana io.
Izany fifidianana izany ary koa ny fanendrena ny mpikambana hafa dia toavina amin’ny
alàlan'ny didim-panjakana raisin’ny Filohan’ny Repoblika.
Andininy 115.- Ny asa maha mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny
Lalàmpanorenana dia tsy azo ampirafesina amin’ny asan’ny mpikambana ao amin’ny
Governemanta, ao amin’ny Antenimiera, amin’izay rehetra andraikitra maha olom-boafidimbahoaka eo anivon’ny vahoaka, amin'izay rehetra asa aman-draharaha hafa ahazoam-bola afatsy ny asa fampianarana, ary koa ny asa aman-draharaha rehetra eo anivon’ny antoko politika
na eo anivon’ny sendikà .
Andininy 116.- Ankoatra ny raharaha ampisahanin’ny andininy hafa ao amin’ny
Lalàmpanorenana, ary araka ny fepetra voalazan’ny lalàna fehizoro dia ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana no :
1° mitsara raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ireo fifanekena, lalàna, hitsivolana, ary
ireo didy amam-pitsipika mahaleotena ;
2° mandamina ny fifanolanana ara-pahefana eo amin’ny Andrim-panjakana roa na maromaro,
na eo amin’ny Fanjakana sy ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana iray na maromaro na
eo amin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana roa na maromaro ;
3° mitsara raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ny fanapahana sy didy amam-pitsipika
nankatoavin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ;
4° mitsara ny raharaha mikasika ny fizotry ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny
Filohan’ny Repoblika ary ny fifidianana solombavambahoaka sy ny loholona ;
5° manambara ny vokatra ofisialin’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika,
solombavambahoaka ary ny fakana ny hevitra amin’ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka.
Andininy 117.- Ny Filohan’ny Repoblika dia mandroso ny lalàna fehizoro sy ny lalàna ary ny
hitsivolana hodinihin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana izay manapaka raha
mifanaraka amin'ny Lalàmpanorenana, alohan’ny amoahana azy ireo hanan-kery.
Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana dia tsy azo avoaka hanankery. Raha izany no miseho, ny Filohan’ny Repoblika dia afaka manapaka, na hamoaka
hanan-kery ireo fepetra hafa amin’ilay lalàna na ilay hitsivolana, na mandroso ny rijan-teny
manontolo amin’ny fanapahana ataon’ny Antenimiera na ny Filankevitry ny Minisitra indray,
araka ny trangan-javatra, na koa tsy hamoaka azy hanan-kery.
Amin’ireo trangan-javatra voalaza etsy ambony ireo, ny fampakaran-draharaha eo amin’ny
Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia mampihantona ny fe-potoana tokony
hamoahana ny lalàna hanan-kery.
Ny fitsipika anatin’ny Antenimiera tsirairay dia aroso hamarinina raha mifanaraka amin’ny
Lalàmpanorenana alohan’ny hampiharana azy. Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny
Lalàmpanorenana dia tsy azo ampiharina.
Andininy 118.- Ny Lehiben’ny Andrim-panjakana na ny ampahaefatry ny mpikambana ao
amin’ny iray amin’ireo Antenimiera roa tonta na ny rantsa-mangaika ao amin’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana na ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny
demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna dia afaka mandroso rijan-teny miendrika lalàna na
fitsipika, ary koa izay rehetra anton-javatra tafiditra amin’ny fahefan’ny Fisarana Avo momba
ny Lalàmpanorenana mba hohamarinina ny fifanarahany amin’ny Lalàmpanorenana.
Raha misy mpiady manasingana fifanoherana amin’ny Lalàmpanorenana eo anatrehan’ny
Fitsarana, dia mampihantona ny fizotry ny raharaha io fitsarana io ary mampakatra ny
raharaha eo amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ao anatin’ny iray volana.
Torak’izany raha misy mpiady milaza eo anatrehan’ny fitsarana fa misy fepetra ao amin’ny
rijan-tenin-dalàna na fitsipika manohintohina ny zo fototra ananany eken’ny
Lalàmpanorenana dia mampiato ny fizotry ny raharaha io fitsarana io araka ny fepetra
voalazan’ny andalana etsy aloha.
Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana dia mitsahatra tsy manankery avy hatrany.
Avoaka amin’ny Gazetim-panjakana ny fanapahana noraisin’ny Fitsarana Avo momba ny
Andininy 119.- Azon’ny Lehiben’ny Andrim-panjakana sy ny rantsa-mangaika ao amin’ny
Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana atao ny maka ny hevitry ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana, mikasika ny fifanarahana na tsia amin’ny Lalàmpanorenana ny
volavolam-panapahan-kevitra na ny fivoasana ny fepetra iray amin’ity Lalàmpanorenana ity.
Andininy 120.- Mamoaka didim-pitsarana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana
amin’ny fifanolanana miseho amin’ny fifidianana sy fakàna ny hevitry ny vahoaka mivantana.
Manao fanapahana kosa izy amin’ny anton-javatra hafa tandrifin’ny fahefana ananany, afa-tsy
ny trangan-javatra voalazan’ny andininy faha-119.
Lazaina ny anton’ny didim-pitsarana sy fanapahana avoakan’ny Fitsarana Avo momba ny
Lalàmpanorenana ary tsy azo akarina fitsarana hafa intsony. Tsy maintsy ampiharina amin’ny
fahefam-panjakana ary koa izay rehetra manam-pahefana amin’ny fitondrana sy ny fitsarana
NY AMIN’NY FITSARANA TAMPONY
Andininy 121.- Ny Fitsarana Tampony no manara-maso ny fampandehanana ara-dalàna ny
antokom-pitsarana misahana ny ady madio sy ady heloka, ny ady atao amin’ny Fanjakana ary
Toy izao no firafiny :
ny Fitsarana Fandravana;
ny Fitsarana momba ny Kaonty
Andininy 122.- Ny Filoha Voalohany sy ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny
Fitsarana Tampony no lehiben’io antokom-pitsarana avo io.
Izy ireo dia tendrena avy, amin’ny alàlan'ny didim-panjakana noraisina teo amin’ny
Filankevitry ny Minisitra araka ny tolokevitra nataon’ny Filankevitra Ambony momba ny
Mpitsara. Raha azo atao dia avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana
ambony indrindra avy amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady
atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena.
Andininy 123.- Misy Filoha lefitra telo manampy ny Filoha Voalohany ao amin’ny Fitsarana
Tampony ka ampiandraiketin-draharaha tsirairay avy ao amin’ny fiadidiana ny Fitsarana
Fandravana, ny Filankevi-panjakana ary ny Fitsarana momba ny Kaonty
Ny Filoha lefitra tsirairay dia tendrena eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra amin’ny
alàlan'ny didim-panjakana avy amin’ny Filohan’ny Repoblika araka ny tolokevitra nataon’ny
Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. Raha azo atao avy amin’ireo mpitsara tranainy
indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady
madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no
Andininy 124.- Ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana Tampony dia ahitana:
ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana fandravana ;
ny Kaomisaria jeneralin’ny lalàna ho an’ny Filan-kevi-panjakana ;
ny Kaomisaria jeneraly momba ny Tahirim-bolam-panjakana ho an’ny Fitsarana
momba ny Kaonty.
Ny lehiben’ireo antokon-draharaha telo ireo no manampy ny Tonia Voalohany Mpampanoa
ao amin’ny Fitsarana Tampony.
Ny lehiben’ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana Fandravana, ny Kaomisaria jeneralin’ny
lalàna na ny Kaomisaria jeneraly momba ny Tahirim-bolam-panjakana dia tendrena eo
amin’ny Filankevitry ny Minisitra araka ny tolokevitra nataon’ny Filankevitra Ambony
momba ny Mpitsara; raha azo atao dia avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny
laharana ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka,
ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena.
Andininy 125.- Ankoatra ireo anjara raharaha ampisahanin’ny lalàna manokana azy dia ny
Fitsarana Tampony no mitsara ny fifanolanana mikasika ny fahefa-mitsara eo amin’ny
fitsarana roa avy amin’ny antokom-pitsarana samihafa.
Andininy 126.- Ny Fitsarana Fandravana no manara-maso ny fampiharan’ireo antokompitsarana misahana ny ady madio sy ady heloka ny lalàna.
Ankoatra ireo fahefana eken’ny lalàna manokana hosahaniny dia izy no manapaka ny
amin’ny fangatahana fandravana atao amin’ny didy navoakan’ireo antoko-pitsarana izay tsy
misy intsony fampakarana azo atao aminy.
Andininy 127.- Ankoatran’ny fahefana sy fepetra manokana voalazan’ny lalàna ny Filankevipanjakana no manamarina ny maha-ara-dalàna ny fanapahana ataon’ny Fitondrandraharaham-panjakana ary mitandro ny fampiharana ny lalàna ataon’ny antoko-pitsarana
misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana.
Ny Filankevi-panjakana, araka ny fepetra faritan’ny lalàna fehizoro no :
1° mitsara ny fangatahana fanafoanana ny fanapahana noraisin’ny manam-pahefana ao
amin’ny fitondran-draharaha foibe, ny fangatahana famerenan-jo noho ny fahavoazana
vokatry ny asan’ny Fitondran-draharaham-panjakana , ny fitarainana amin’ny fifanolanana
mikasika ny hetra ;
2° mandinika ny fampakarana fitsarana ambony ny fanamarinana ny maha ara-dalàna ny
fanapahana nataon’ny manam-pahefana ao amin’ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjarampahefana ;
3° mitsara ny fampakarana fitsarana ambony na ny fandravana ireo didy navoakan’ny
fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana na antokom-pitsarana misahana ny ady
atao amin'ny Fanjakana manana fahefa-mitsara manokana.
Izy no mitsara ireo raharaha sasantsasany ifanolanana amin’ny fifidianana.
Azon’ny Praiminisitra sy ny mambra ao amin’ny Governemanta atao ny maka hevitra aminy
mba hanomezany ny heviny, mikasika ny volavolan’ny rijan-tenin-dalàna sy ny didy amampitsipika ary ny fifanarahana na momba ny fivoasana ny voalazan’ny lalàna sy ny didy amampitsipika.
Araka ny fangatahan’ny Praiminisitra dia afaka mandinika rijan-tenin-dalàna mikasika ny
fandaminana, ny fomba fiasa sy ny andraikitry ny sampan-draharaham-panjakana izy.
Andininy 128.- Ny Fitsarana momba ny Kaonty no manara-maso ny fampiharan’ireo
antokom-pitsarana misahana ny fitantanam-bola ny lalàna.
Ankoatra ireo fahefana eken’ny lalàna manokana hosahaniny dia izy no:
1° mitsara ny kaontin’ireo mpitàm-bolam-panjakana ;
2° manara-maso ny fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny
tetibolan’ny antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana ;
3° manara-maso ny kaonty sy ny fitantanana ny orinasam-panjakana ;
4° mitsara ny fampakarana ambony natao tamin’ireo didim-pitsarana navoakan’ny fitsarana
momba ny fitantanam-bolam-panjakana na ireo antokon-draharaham-panjakana miendrika
5° manampy ny Antenimiera sy ny Governemanta eo amin’ny fanaraha-maso ny
fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Andininy 129.- Ny Fitsarana Tampony dia mandefa tatitra isan-taona momba ny asa
nosahaniny any amin'ny Filohan’ny Repoblika, ny Praiminisitra, ireo Filohan’ny Antenimiera
roa tonta sy ny Minisitra miandraikitra ny Fitsarana ary ny Filankevitra Ambony momba ny
Io tatitra io dia tsy maintsy avoaka amin’ny Gazetim-panjakana amin’ny taona manaraka ny
fikatonan’ny taom-pitsarana voakasika.
Andininy 130.- Ny Filoha Voalohany, ny Tonia Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Ambony
dia tendrena eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra amin’ny alàlan'ny didim-panjakana
noraisin’ny Filohan’ny Repoblika araka ny tolo-kevitry ny Filankevitra Ambony momba ny
Mpitsara. Raha azo atao, avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana
ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao
amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena.
NY AMIN’NY FITSARANA AVO
Andininy 131.- Ny Filohan’ny Repoblika dia tsy tompon’andraikitra noho ny zava-natao teo
amin’ny asany na teo am-panaovana ny raharahany afa-tsy ny amin’ny famadihana
Tanindrazana, ny fandikana bevava na ny fandikana miverimberina ny Lalàmpanorenana, na
koa ny fanaovana antsirambina ny andraikiny ka hita miharihary fa tsy mifanaraka amin’ny
fisahanana ny asa maha-filoha.
Ny Antenimierampirenena no afaka miampanga azy amin’ny alàlan'ny latsabato atao
ampahibemaso ary lanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy.
Azo tsaraina eo anoloan’ny Fitsarana Avo Izy. Ny fiampangana dia mety hiafara amin'ny
fanalàna azy amin’ny toerany.
Andininy 132.- Raha misy ny fanonganana ny Filohan’ny Repoblika dia ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana no mizaha fototra ny fahabangan’ny toerany ary tanterahina
araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-47 etsy ambony ny fifidianana Filoha vaovao. Ny
Filoha voaongana dia tsy mahazo milatsaka hofidina intsony amin’izay rehetra mety ho
Andininy 133- Ny Filohan’Antenimiera, ny Praiminisitra, ny mpikambana hafa ao amin’ny
Governemanta ary ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia
tompon’andraikitra itataovam-pamaizana noho ny zava-natao teo amin’ny asany ka voatondro
ho heloka bevava na heloka tsotra tamin’ny fotoana nanaovana izany, ka ny Fitsarana Avo no
Ny Antenimierampirenena no afaka miampanga azy ireo amin’ny amin’ny alàlan'ny latsabato
atao ampahibemaso lanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana.
Ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony no manao ny fanenjehana.
Andininy 134. - Ny Filohan’Antenimiera, ny Praiminisitra, ny mpikambana hafa ao amin’ny
Governemanta ary ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia azon’ny
antoko-pitsarana momba ny lalàna ifampitondran’ny daholobe tsaraina raha mandika lalàna
tamin’ny fotoana tsy anatanterahany andraiki-panjakana.
Ny Tonian’ny Fampanoavan’ny Fitsarana Fandravana no manao ny fanenjehana
Amin’izany raha misy ny heloka tsotra, ny antokom-pitsarana famaizana mahefa dia
tarihin’ny Filohan’ny Fitsarana, ary raha misy ny tsy fahafahany dia filoha lefitra iray no
Ampiharina koa amin’ireo solombavambahoaka, loholona ary ny mpikambana ao amin’ny
Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny fepetra voalazan’ireo andàlana telo etsy aloha
Andininy 135. – Manana fahefana feno sy tanteraka hitsara ny Fitsarana Avo.
Andininy 136.- Misy mpikambana iraika ambinifolo ao amin’ny Fitsarana Avo. Ireto avy izy
Fandravana avy hatrany raha misy tsy fahafahany ;
2° Filohan’ny Rantsana roa avy ao amin’ny Fitsarana Fandravana sy mpisolo toerana roa
tendren’ny Fivoriam-ben’io Fitsarana io ;
3° Filoha Voalohany roa avy amin’ny Fitsarana Ambony sy mpisolo toerana roa tendren’ny
Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony ;
4° Solombavambahoaka tompon-toerana roa sy solombavambahoaka mpisolo toerana roa
nofidin’ny Antenimierampirenena amin’ny fiantombohan’ny fe-potoana fanaovan-dalàna ;
5° Loholona tompon-toerana roa sy loholona mpisolo toerana roa
Antenimierandoholona amin’ny fiantombohan’ny fe-potoana fanaovan-dalàna.
6° Mpikambana roa tompon-toerana sy mpikambana roa mpisolo toerana avy amin’ny
Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna.
Ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony ampian’ny iray na
maromaro amin’ireo mpikambana ao amin’ny fampanoavana iadidiany no misolo tena ny
fampanoavana. Raha misy tsy fahafahan’ny Tonia Voalohany Mpampanoa dia ny Tonia
Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Fandravana no misolo toerana azy.
Ny lehiben’ny Firaketan-draharahan’ny Fitsarana Tampony no mpiraki-draharahan’ny
Fitsarana Avo. Izy no mitazona ny firaketana an-tsoratra. Raha misy tsy fahafahany dia ny
lehiben’ny firaketan-draharahan’ny Fitsarana Fandravana no misolo azy.
Ny fandaminana sy ny paika arahina manoloana ny Fitsarana Avo dia feran’ny lalàna
NY AMIN’NY FIFANEKENA SY FIFANARAHANA IRAISAM-PIRENENA
Andininy 137.- Ny Filohan’ny Repoblika no mifampiraharaha sy mankato ny fifanekena
iraisam-pirenena. Ampahafantarina azy izay fifampiraharahana rehetra mahakasika fifanekena
iraisam-pirenena tsy ilàna fankatoavana.
Tsy maintsy lalàna no manome alàlana amin’ny fankatoavana na fanekena ny fifanekempihavanana, ny fifanekem-barotra, ny fifanekena na fifanarahana mikasika ny fandaminana
iraisam-pirenena, ireo izay mampiditra andraikitra ho hefaina amin’ny volam-panjakana
tafiditra amin’izany ny fisamboram-bola avy any ivelany, ireo izay manova ny fepetra
miendrika lalàna, ireo izay mikasika ny fitoetry ny olona, fifanekena tsy hifanafika, ireo izay
manova ny faritry ny tanim-pirenena.
Alohan’izay fankatoavana rehetra atao, dia atolotry ny Filohan’ny Repoblika ny Fitsarana
Avo momba ny Lalàmpanorenana ireo fifanekena, mba hohamarinina raha mifanaraka
amin’ny Lalàmpanorenana. Raha misy tsy fifanarahana amin’ny Lalàmpanorenana, dia tsy
azo atao ny fankatoavana raha tsy aorian’ny fanovàna ny Lalampanorenana.
Raha vantany vao navoaka ho fantatry ny besinimaro ny fifanekena na ny fifanarahana
nankatoavina na nekena ara-dalàna dia manan-kery mihoatra noho ny lalàna raha toa
ampiharin’ny ankilany ny fifanarahana na ny fifanekena tsirairay.
Ny fifanekena mahakasika firotsahanan’i Madagasikara amina Vondrom-paritra dia tsy
maintsy aroso amin’ny fitsapa-kevi-bahoaka hakàna ny heviny.
Andininy 138.- Ny Praiminisitra no manao ny fifampiraharahana sy manao sonia ny
fifanarahana iraisam-pirenena tsy ilàna fankatoavana.
NY AMIN’NY FANDAMINANA NY FIADIDIANA NY LAFIN-TANY
NY AMIN’NY FEPETRA ANKAPOBE
Andininy 139.- Ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana,
aman’andraikitra eken’ny lalàna ary mizaka tena ara-pitantanana sy ara-bola, no sehatra eo
amin’ny rafi-pitondrana ahazoan’ny olom-pirenena mandray anjara amin’ny fitantanana ny
raharaham-bahoaka ary miantoka ny fanehoana izay fahasamihafana misy eo amin’izy ireo sy
ny mampiavaka azy.
Lalàna no mamaritra ny fari-pananany izay ahitana ny fananana ampiasaina ho amin’ny
tombontsoam-bahoaka sy ny fananana manokana.
Ny tany tsy hita tompo sy ireo tsy manan-tompo dia anisan’ny fananana tantanan’ny
Andininy 140.- Manana fahefana handray didy amam-pitsipika ny Vondrombahoakamparitra Itsinjaram-pahefana.
Ny Fanjakana no mitandro ny tsy hisian’ny fifanipahan’ny didy amam-pitsipiky ny
Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana iray hafa.
Ny Fanjakana no miahy ny hisian’ny fampandrosoana mirindra eo amin’ireo samy
Vondrombahoakam-p aritra Itsinjaram-pahefana ka izany dia mifototra amin’ny firaisankinam-pirenena, ny harena azo trandrahana ananan’ny faritra tsirairay avy ary ny fifandanjana
isam-paritra amin’ny alàlan’ny fepetra fifampitsinjarana mifanentana.
Handraisana fepetra manokana ho ny fampandrosoana ireo faritra izay tratra aoriana,
anisan’izany ny famoronana tahiry manokana ho amin’ny firaisan-kina.
Andininy 141.- Ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ampian’ny Fanjakana no
mitandro indrindra ny filaminam-bahoaka, ny fiarovana ny fiaraha-monina, ny fitantanandraharaha, ny fanajariana ny tany, ny fampandrosoana ara-toekarena, ny fiarovana ny tontolo
iainana ary ny fanatsarana ny fari-piainana.
Amin’ireo lafiny voalaza ireo dia ny lalàna no mametra ny fitsinjarana ny fari-pahefana mba
hitsinjovana ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan’ny faritra.
Andininy 142.- Mizaka tena ara-bola ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana.
Mamolavola sy mitantana ny tetibolany izy ireo, araka ny feni-kevitra ampiharina amin’ny
fitantanana ny volam-panjakana.
Vatsiana amin’ny loharanom-bola maro samihafa ny tetibolan’ny Vondrombahoakam-paritra
Andininy 143.- Ny Kaominina, ny Faritra ary ny Faritany no Vondrombahoakam-paritra
Itsinjaram-pahefana eto amin’ny Repoblika.
Ny famoronana sy ny famaritana ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana dia tsy
maintsy mifototra amin’ny fitoviana eo amin’ny toe-tany, toekarena, sosialy ary kolontsaina.
Ny lalàna no mamaritra izany.
Andininy 144.- Malalaka ny fitantanana tena malalaka ireo Vondrombahoakam-paritra
Itsinjaram-pahefana ka amin’ny alàlan’ny fanapahan-kevitry ny antenimierany no andamina
ny raharahany araka ny tandrifim-pahefana omen’ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna azy ireo.
Tsy tokony mifanohitra amin’ny Lalàmpanorenana sy ny didy aman-dalàna izany fanapahankevitra izany.
Andininy 145.- Ny fisoloantena ny Fanjakana eo anivon’ny Vondrombahoakam-paritra
Itsinjaram-pahefana dia fehezin’ny lalàna.
Andininy 146.- Ny Fanjakana dia miandraikitra ny fampiharana ireto fepetra manaraka ireto :
fitsinjarana ny fari-pahefana eo amin’ny Fanjakana sy ny vondrombahoakamparitra Itsinjaram-pahefana ;
fitsinjarana ny loharanom-bola eo amin’ny Fanjakana sy ny vondrombahoakamparitra Itsinjaram-pahefana ;
fitsinjarana ny raharaham-panjakana eo
Andininy 147.- Ny fidiram-bolan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana dia
ahitana indrindra :
 Ny vola azo avy amin’ ny hetra sy haba nolanian’ny Filankevitra ary takiana
mivantana harotsaka amin’ny tetibolan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjarampahefana ; lalàna no mamaritra ny karazana sy ny sanda ambony indrindra amin’ireny
hetra sy haba ireny izay hijerena indrindra ny andraikitra iantsorohan’ny
Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana sy ny loloha ara-ketra ankapobe
mitambesatra amin’ny Firenena ;
 Ny anjara tokony ho azy avy hatrany amin’ny vola azo amin’ny hetra sy ny haba
miditra ao amin’ny tetibolan’ny Fanjakana ; izany anjara izany izay sintonina avy
hatrany amin’ny fotoana famoriana ny vola dia faritan’ny lalàna araka ny isan-jato
izay ijerena ny andraikitra sahanin’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana
amin’ny ankapobeny sy isam-batan’olona mba hiantohana ny fampandrosoana aratoekarena sy ara-tsosialy mifandanja eo amin’ireo Vondrombahoakam-paritra
Itsinjaram-pahefana rehetra manerana ny tanim-pirenena ;
 ny vola vokatry ny fanampiana avy amin'ny Fanjakana, voatokana na tsia ho amin'ny
asa, ary nomena avy amin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny Vondrombahoakamparitra Itsinjaram-pahefana rehetra na ny iray amin'izy ireo ka atao mifandanja
amin'ny toe-javatra manokana misy eo aminy, na hamenoan’ireo Vondrombahoakamparitra Itsinjaram-pahefana ny adidiny ara-bola izay nateraky ny fandaharan’asa na
tetik’asa notapahan'ny Fanjakana ary tanterahan'ireo Vondrombahoakam-paritra
 ny vola azo avy amin'ny fanampiana avy any ivelany ka tsy averina sy ny vola azo avy
amin'ny fanomezana nomena ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ;
 ny vola miditra avy amin'ny fananany manokana;
 ny fisamboram-bola izay ferana araka ny lalàna ny fepetra momba izany.
NY AMIN’NY RAFITRA
NY AMIN’NY KAOMININA
Andininy 148.- Ny kaominina no Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana fototra.
Ny kaominina dia atao hoe ambonivohitra na ambanivohitra ka ny fisokajiana dia miankina
amin’ny tahan’ny mponina sy ny lafim-pivoarana ary ny fiitaran’ny Tanàna.
Andininy 149.- Ny kaominina dia mandray anjara amin’ny fampandrosoana ara-toekarena,
ara-tsosialy, ara-kolotsaina sy momba ny tontolo iainana eo amin’ny fari-piadidiam-paritra
misy azy. Ny fari-pahefany dia mikasika indrindra ny feni-kevitry ny Lalàmpanorenana sy ny
lalàna ary koa ny feni-kevitra momba ny fanatonana ny vahoaka, ny fampivoarana ary ny
fiarovana ny tombontsoan’ny mponina.
Andininy 150.- Ny kaominina dia afaka mivondrona ho amin’ny fanatanterahana tetikasa
Andininy 151.- Ao amin’ny kaominina, ny asa fanatanterahana sy fanapahan-kevitra dia
sahanin’ny rantsa-mangaika miavaka sy nofidina tamin’ny latsa-bato andraisan’ny rehetra
Ny mpikambana, ny fandaminana, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny rantsamangaika mpanatanteraka sy mpanapa-kevitra ary koa ny fomba sy ny fepetra momba ny
fifidianana ny mpikambana ao amin’ny kaominina dia ferana araka ny lalàna.
Andininy 152.- Ny Fokonolona, nalamina ho fokontany eo anivon’ny kaominina, no fototry
ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin’ny lafiny fiaraha-monina sy ny kolontsaina ary
ny tontolo iainana.
Ny tompon’andraikitra ao amin’ny fokontany dia mandray anjara amin’ny famolavolana ny
fandaharanasa momba ny fampandrosoana ny kaominina ao aminy.
NY AMIN’NY FARITRA
Andininy 153.- Miompana indrindra amin’ny lafiny toekarena sy fiaraha-monina ny
andraikitry ny faritra.
Ny faritra no misahana ny fampiroborobona sy fandrindrana ny fampandrosoana aratoekarena sy ara-tsosialy ao anatin’ny fari-piadidiany ka mandrafitra ny fomba fandaminana,
ny fanajariana ny tany ary ny fampiharana ny hetsika fampandrosoana rehetra miaraka
amin’ny antokon-draharaha miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana.
Andininy 154.- Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny rantsa-mangaika tarihin’ny
Lehiben’ny Faritra izay olo-boafidy tamin’ny alalan’ny latsabato andraisan’ny rehetra anjara.
Ny Lehiben’ny Faritra no tompon’andraikitra voalohany amin’ny tetika sy ny fanatanterahana
ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin’ny faritra
Izy no Lehiben’ny Fitondran-draharaham-panjakana eo amin’ny faritra.
Andininy 155.- Ny asa fanapahan-kevitra dia sahanin’ny Filankevi-paritra ka ny mpikambana
dia olom-boafidy tamin’ny latsabato andraisan’ny rehetra anjara.
Ny solombavambahoaka sy ny loholona avy amin’ny fari-piadidiana samihafa ao amin’ny
faritra dia mpikambana avy hatrany ao amin’ny Filankevi-paritra, ary anisany mpanapankevitra.
Andininy 156.- Ny mpikambana, ny fandaminana, ny anjara raharaha ary ny
fampandehanana ny rantsa-mangaika mpanatanteraka sy mpanapa-kevitra ary koa ny fomba
sy ny fepetra momba ny fifidianana ny mpikambana ao amin’ny faritra dia ferana araka ny
NY AMIN’NY FARITANY
Andininy 157.- Ny Faritany dia vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, manana zo
aman’andraikitra eken’ny lalàna ary koa mizaka-tena ara-pitondrana sy ara-bola.
Izy no miantoka ny fandrindrana sy ny fampirindrana ny asa fampandrosoana ho an’ny
tombontsoan’ny faritany ary miahy ny fampandrosoana ara-drariny sy mirindra ireo
Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ao amin’ny faritany.
Ny faritany no manatanteraka ny politika momba ny fampandrosoana izay nofaritana sy
notapahina teo amin’ny filankevi-paritany.
Andininy 158.- Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny rantsa-mangaika tarihin’ny
Lehiben’ny Faritany izay olom-boafidy tamin’ny alalan’ny latsabato.
Ny Lehiben’ny Faritany no tompon’andraikitra voalohany amin’ny tetika sy ny
fanatanterahana ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao
amin’ny faritany misy azy.
Izy no Lehiben’ny Fitondran-draharaham-panjakana eo amin’ny faritany.
Andininy 159.- Ny asa fanapahan-kevitra dia sahanin’ny Filankevi-paritany ka ny
mpikambana ao aminy dia olom-boafidy amin’ny alàlan’ny latsabato andraisan’ny rehetra
faritany dia mpikambana avy hatrany ao amin’ny Filankevi-paritany, ary anisany mpanapankevitra.
Andininy 160.- Ny ho anisany, ny fandaminana, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana
ny rantsa-mangaika mpanatanteraka sy mpanapa-kevitra ary koa ny fomba sy ny fepetra
momba ny fifidianana ny mpikambana ao aminy dia ferana araka ny lalàna.
Andininy 161.- Tsy misy fanitsiana azo atao amin’ny lalampanorenana na dia iray aza raha
tsy hita fa tena ilaina
Andininy 162.- Raha toa ka hita fa tena ilaina ny fanitsiana dia anjaran’ny Filohan'ny
Repoblika no manapaka eo amin'ny Filankevitry ny Minisitra, na ny Antenimiera amin'ny
alalan’ny latsabato misaraka izay nolanian'ny roa ampahatelon'ny mpikambana no manao
Ny volavola na tolokevitra fanitsiana dia tsy maintsy ankatoavin’ny telo ampahaefatry ny
mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona.
Ny volavola na tolokevitra izay nankatoavina dia aroso amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka
Andininy 163.- Ny maha-Repoblika ny Fanjakana, ny foto-kevitra maha-iray tsy anombinana
ny tanim-pirenena, ny foto-kevitry ny fisarahan'ny fahefana, ny foto-kevitry ny fizakantenan'ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana, ny faharetana sy ny isan'ny fepotoana iasan'ny Filohan'ny Repoblika, dia tsy azo anaovana fanitsiana.
Ny fahefana manokana ananan'ny Filohan'ny Repoblika ao anatin'ny fisehoan-javatra
mampihotakotaka na savorovoro politika dia tsy manome azy ny zo hanao fanitsiana ny
FEPETRA TETEZAMITA SY SAMIHAFA
Andininy 164.- Izao Lalàmpanorenana izao dia holaniana amin'ny alàlan'ny fitsapan-kevibahoaka. Ampiharina izany raha vantany vao havoakan'ny Filohan'ny Fahefana Avon'ny
Tetezamita hanan-kery, ao anatin'ny folo andro manaraka ny fanambaràna farany ny vokatry
ny fitsapan-kevi-bahoaka ataon'ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana.
Andininy 165.- Ny lalàna manan-kery dia mbola mihatra hatrany amin'ireo fepetra rehetra
izay tsy mifanohitra amin'ity Lalàmpanorenana ity.
Ny rijan-tenin-dalàna mikasika ireo Andrim-panjakana sy ireo rantsa-mangaika ary koa ny
lalàna fampiharana voalazan’ity Lalampanorenana ity dia raisina amin’ny alalan’ny
Andininy 166.- Mandra-pametrahana amin'ny toerana miandàlana ny Andrim-panjakana
voalazan'izao Lalàmpanorenana izao, ireo Andrim-panjakana sy ireo rantsa-mangaika voalaza
ho amin'ny fe-potoanan'ny Tetezamita dia manohy misahana ny asany.
Mitsahatra avy hatrany ny asan’ny Filankevitra Ambonin’ny Tetezamita sy ny Kongresin’ny
tetezamita vantany vao voafidy ny biraon’ny Antenimiera vaovao.
Eo am-piandrasana ny fametrahana amin’ny toerany ny Antenimierandoholona dia mizaka ny
fahefana rehetra hanao lalàna ny Antenimierampirenena.
Mandrampahatongan’ny fotoana andraisan’ny Filohan'ny Repoblika vaovao ny fahefany dia
manohy misahana ny asan'ny Filoham-panjakana ny Filohan’ny Fahefana Avon’ny
Raha misy fahabangan-toeran’ny Filoha, n’inon’inona antony dia iarahan’ny Praiminisitra,
Filohan’ny Filankevitra Ambony ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Kongresy misahana ny
Andininy 167.- Ho fanajàna ny Lalampanorenana, ny Filohan’ny Repoblika dia miantso ireo
ambaratongam-pahefana mahefa mba hanolotra ireo ho mpikambana ao amin’ny Fitsarana
Avo ahafahana manangana io rafitra io. Izany dia tanterahina ao anatin’ny 12 volana
manaraka ny fotoana nandraisany fahefana, ka raha vao tapitra io fe-potoana io dia atsangana
avy hatrany ny Fitsaràna Avo. Raha misy ny tsy fahatomombanana dia azon’ny rehetra
mahaporofo tombontsoa atao ny mampakatra ny raharaha manoloana izay andrim-panjakana
mahefa mba ny hangatahana fanasaziana.
Raha misy antony manokana, amin'izay mikasika ny Filohan'ny Repoblika, ny Fitsarana Avo
momba ny Lalàmpanorenana dia omem-pahefana handray ny sazy izay mety ho noraisin'ny
Fitsarana Avo raha toa izy ka efa nijoro.
Andininy 168.- Ao anatin’ny tondrozotra mahakasika ny fampihavanam-pirenena, dia
atsangana ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy; ka ny lalàna no mamaritra ny momba
ny mpikambana sy ny andraikiny ary ny fomba entiny miasa.
lalampanorenana_2010.pdf (PDF, 153 Ko)
momba filohan lalana fitsarana dalana izany fanjakana pirenena panjakana repoblika andininy lalampanorenana rehetra araka fepetra
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00238640.